သက်တန့် တစ်ခုရဲ့ ရောင်စဉ်ငြိမ်း: 2009
သင်ဘယ်တုန်းကမှ မမြင်ဖူးသော ငှက်များ
Byie Ashin Pei Ni ...
ဘုရားဂုဏ်တော် ၊ တရားဂုဏ်တော် ၊ သံဃာဂုဏ် တော်
နယ်စပ်လမ်းက ၀မ်းတထွာ ၆ -----ခိုင်မာကျော်ဇော-----ဒီ...
မန်မာပြည်မှာ နေလို့ အရမ်းအရမ်းကောင်းတယ်..ဟုတ်တယ်မလ...
နော်ဝေကောင်ကင်ယံမှ ထူဆန်းတဲ့ အလင်းတန်း
ငွေဆောင်ရောက် ချောင်းသာ ဧည့်သည် အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ...
ထိုင်းနိုင်ငံ... အီကွေတာ အနိဌာရုံများနှင့် သွေးမတိ...
မိခင်အရင်းမှ ရက်သားအရွယ် ကလေးငယ်ကို လူကုန်ကူးသူထံ ...
မြန်မာအလုပ်သမားများအား တင်ဆောင်လာသည့် ထိုင်းရဲကားက...
Ko Min Ko Naing (Back Mirror) ...
Theravada (Black Paper & White Text) ...
Theravada (White Paper & Black Text) ...
Biography of Student Leader Ko Ko Gyi Written by H...
လွတ်လပ်ေ၇းနေ. ကို ဂုဏ်ပြုခြင်း။
သားတို့၊ သမီးတို့ထံ ပေးစာ (၂) - အမွေခံထိုက်သူ...
စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတတ်သူတွေမှာ ရှိတဲ့ အချင်းအရာ လက္ခဏာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သက်ရင် ဘယ်အရာမှ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မ...
ကျမတော်တော်ညံ့ခဲ့ပါတယ် - ဟောပြောသူ- ဂျူး
In the End (Short Novel) by Khin Ma Ma Myo ...
Dr theinlwin ...
Buddha and Christian ion ...
ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘုရားတကာ တဦး သေပြီးနောက် ဇီးကွက် ဘ...
Myat Yay Ma Kya Khin ...
တောင်သမန်အင်းက ထမင်းလုံးတစ္ဆေ မကြောက်သူများ တောင်မ...
တောင်သမန်အင်းက ထမင်းလုံးတစ္ဆေ မကြောက်သူများ
ရေတံခွန်လို စီးဆင်း နေပါရာလား . . .
တောင်သမန်အင်းမှာ . . .
တောင်သမန် အင်းကို နောက်ခံထား
ဦးပိန် တံတားပေါ်မှာ ဗီဒီယို မင်းသားဂိုက်နဲ့
ဓာတ်ပုံ အလှရိုက်ဦးမလား . . .
ဟော . . .ဒီစကား ကြားသွားလို့
မြို့ကရောင်စုံကားတွေ စက်အင်ဂျင် ကောင်းကောင်းနဲ့
ရှင်လောင်း လှည့်သလို လာကြပြီ။
ရေပေါ်မှာ ပျော်ပွဲစားဖို့. . .
ဦးပိန် တံတားပေါ်က . . .
ဘ၀ဖျားနာနေတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စကား
ယတြာ ချေဦးမလား . . .
အိမ်မှာ အလှမွေး ထားဦးမလား
စာဝါ၊ ပျံလွှားငှက်၊ ဇီးကွက်
အစာချီဖို့ ချောင်းနေတဲ့ ကျီးကန်းမလေးတွေ။
မြို့က ဧည့်သည်တွေ လာနေပြီ . . .
ထံတျာ သမုဒ္ဒရာ အတွက်
အစာအိမ်ချိန်ကိုက် ဗုံးတစ်လုံး ကွဲသွားပြီ။
ပန်းချီကား ၀ယ်ဦးမလား . . .
အနုပညာ စီးပွားရေး ခြေချသူတွေလည်း
ဦးပိန် တံတားအောက်ဘက်က . . .
မယ်ဇယ်ပင်ရိပ်နဲ့ ထန်းလက်တဲ ဆိုင်မှာ
ဘီယာ၊ ရမ်၊ ၀ီစကီ
ဘဲအုပ်က တစ်ရာ နှစ်ရာ . . .
ဘဲအုပ်ကျောင်း နေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့လွယ်အိတ်ထဲ
၀ါဆို . . . ၀ါခေါင်မှာ . . .
ဒီအင်း အလှကို စာချုပ်ချုပ်
ခြင်ထောင် . . .
သူတို့ ဖွပ်တဲ့ အ၀တ်တွေဖြူပေမယ့်
မဉ္ဇူသက္က နတ်ပန်းကောက်တဲ့ ရွာသူတစ်သိုက်
မြွေဆိုး ကိုက်ခံရတဲ့ သတင်း
ဓားတစ်လက်ကို စိုက်ထိုး ခံလိုက်ရတယ်။
တောင်သမန်အင်းကိုဖြတ် . . .
ကျန်းမာရေး အထွက် လမ်းလျှောက်သူလျှောက်
ခြေလှမ်းကျဲသလောက် ခရီး မရောက်ပေမယ့်
အင်ဂျင်စက်သုံး တပ်ထားသူတို့ ခရီးက
မီးနီ အဆီးအတား ကင်းကင်း
အချစ် အိပ်မက်တွေကို လိုက်ပွဲယူ
တောင်သမန်အင်းရဲ့ဟိုမှာဘက် . . .
အခါခါ သေခဲ့တဲ့ မနက်ဖြန်ဟာ
တောင်သမန်အင်း အိပ်ရေး ပျက်နေပေါ့။
၇ - ၈ ဖာလုံ ခရီးအရောက် . . .
တောင်ဝှေး ထောက်သွားနေတဲ့ ဦးပိန် တံတားနဲ့
ပါးစပ်လှုပ် လက်လှုပ်ရင်း အသက်ရှင် နေထိုင်သူများ
စိုက်ထားပြီး ဒုက္ခကို ရိတ်သိမ်းဖို့ မေ့နေသူများ
သက်သတ်လွတ် စားနေတဲ့ မြို့လေးရဲ့ မိုးခေါင်ရက်များ
အမြင်ခါးခါးနဲ့ ခံစားသူ စိတ်ကြိုက်
တောင်သမန်အင်းက သူကိုယ်တိုင် ဒီဗီဒီ ရိုက်နေပေါ့။
သိပြီးသား အားလုံးအတွက် . . .
နောက်ဆုံး ကတ် ရိုက်ချက်
ဇာတ်သိမ်းတွက် နောက်ဆုံး အခမ်းအနား
ဆေးလိပ် ကွမ်းယာ ရောင်းတဲ့ တိုက်ဂေါမလေး တစ်ယောက်
တောင်သမန်အင်းမှာ အရှက်ကို ဆေးကြော လိုက်သလို . . .
ရေတံခွန်လို အလွမ်းတွေ ရွဲရွဲစိုပြီး
မိသားစု ငိုနေတဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းမှာတော့
ကျွန်တော်က မှတ်တမ်းတင်သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:38 AM0comments
In the End (Short Novel) by Khin Ma Ma Myo
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 4:13 AM0comments
Myat Yay Ma Kya Khin
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 3:56 AM0comments
ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘုရားတကာ တဦး သေပြီးနောက် ဇီးကွက် ဘ၀ဖြင့် အိမ်လာလည်
တောင်တန်းနယ် ဘင်ဒရိုင်ဘင် ခရိုင် အင်းသုံးဆယ် ကျေးရွာတွင် ကျောင်းတကာတဦး သေဆုံးပြီးနောက် ဇီးကွက် (ဒေသအခေါ် ခေါင်တောက်) ဖြစ်သွားပြီး သူအား ရက်လည်ဆွမ်း ကုသိုလ် ကောင်းမူ ပြုလုပ်ရာသို့ လာရောက်လည် ပတ်သွားခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ကျေးရွာမှ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ပြောသည်။
“တော်တော်ကို ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။ ရိုက်ယူထားလိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက ထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်အတွက် သက်သေ အထောက်အထားတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မိသားစုက ရက်လည် ဆွမ်းကျွေးတော့ ကျောင်းတကာကြီးက ဇီးကွက်ဘ၀နဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို လာတယ်။ သူလှူဒါန်းထားခဲ့တဲ့ ကျောင်းက တိုင်မှ စနားတယ်။ ပီးရင် သူလှူဒါန်းထားခဲ့တဲ့ နာရီမှာနားတယ်။ နောက်ပီး သူလှူဒါန်းထားခဲ့တဲ့ လေပင်ကာပေါ်မှာ နားတယ်။ အဲဒီက ပျံသွားတယ်။ နောက်ဆုံး သူလှူဒါန်းထားခဲ့တဲ့ အုတ်နံရံပေါ်မှာ လာနားတယ်။ အဲသလို နားနေတဲ့ အချိန်က ကောင်းမူ စလုပ်တဲ့ ညနေ ၆ က စနားနေတာ ၂၄ နာရီပြည့်ပြီး နောက်တနေ့ညနေ ၆ နာရီမှ ပျံသွားတယ်၊ ပျံသွားတော့လည်း သူနေအိမ်ကို တန်းပြန်သွားတယ်။ သူ့အိမ်မှာ ၄ နာရီလောက်နေတယ်။ နောက်တော့ ဘယ်ပျံသွားမှန်း မသိဘူး။ ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။”
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:14 AM0comments
ရွှေပြည်သာမြို့တွင် ဘာသာခြားဘဝမှ ဗုဒ္ဓဘသာသို့ ပြောင်းလာသော မိသားစု တစ်စုရှိ၏။ သူတို့ မိသားစုတွင် မိခင်၏ မိဘနှစ်ပါးသည် ဘာသာခြားများ ဖြစ်သည်။ ဖခင်က ကပြားဖြစ်သည်။ အဖေ အခြားဘာသာဝင်၊ အမေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သည်။ သူကား ဖခင်ဘက်လိုက်ပြီး အခြားဘာသာဝင် ဖြစ်သွားသည်။
သို့သော် သူ့အမေကား သူနှင့်လိုက်နေသည့် တိုင်အောင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာ ကိုးကွယ်လျက်ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပီပီ သူ့သားကို တစ်ကြိမ်လောက် ဒုလ္လဘရဟန်း ဝတ်စေချင်သည်။ သို့သော် သူ့ချွေးမက ခွင့်မပြု။ သူ့ချွေးမကား ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဆရာမကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ယခု ထိုအမျိုးသမီး ကိုယ်တိုင် စာရေးသူအား ရင်ဖွင့်ပြောကြားသော စကားများကို အရင်းအတိုင်း ဖောက်သည်ချလိုက်ရပေသည်။
“ဆရာတော်က ဘာသာတန်ဖိုး ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ အခု တစ်ဝက်လောက်တော့ ရေးပြီးနေပြီ။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ဘာသာခြားကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောင်းလာသူတွေရဲ့ အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးမှာ။ ဒါယိကာမကြီးတို့ မိသားစု အကုန်လုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြောင်းလာကြတာဆိုတော့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ပြောင်းလာတယ်ဆိုတာကို သိခွင့်ရရင် သိပါရစေ။”
“တပည့်တော် အပါအဝင် မိသားစုအားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ ရောက်အောင် လုပ်ပေးသူက လူလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရဟန်း သံဃာလည်း မဟုတ်ဘူး။”
“ဒါဖြင့် ဘယ်သူက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတာလဲ”
“ပြိတ္တာဘုံ ရောက်နေတဲ့ တပည့်တော်မရဲ့ ယောက္ခမကြီးပါ”
“တပည့်တော်ရဲ့ ယောက္ခမကြီးဟာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ သူ့ကျမှ ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရတာ။ ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မစွန့်ပါဘူး။ ဘာသာ မပြောင်းတဲ့အတွက် မယားတစ်ယောက် ရမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို ဘာမျှ မရခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ဘာသာခြား မိသားစု အသိုက်အဝန်းထဲမှာ အစေခံမ တစ်ယောက်လိုပဲ နေခဲ့ရပါတယ်”
“တပည့်တော်မနဲ့ရတာ သူ့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သားပါ။ သားလေး အရွယ်ရောက်တာနဲ့ သူဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာပီပီ ရှင်ပြုချင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ ယောက်ျားဘက်က ဘာသာအတိုင်းပဲ ရိုးရာပွဲတွေ လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီတုန်းကလည်း မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွက်ပါပဲ။”
“တပည့်တော်မနဲ့ သူသား လက်ထပ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာလည်း သားကို ချစ်တဲ့ဇောနဲ့ တပည့်တော်မရဲ့ အိမ်မှာ လိုက်နေတယ်။ ယောက္ခမကြီးဟာ တပည့်တော်မ စိတ်ကြည်လင်တဲ့ အချိန်ကို အမြဲတမ်း ချောင်းနေတယ်။ တပည့်တော်မ မျက်နှာ ကြည်ကြည်လင်လင် ရှိပြီဆိုတာနဲ့ အနားကိုလာပြီး သူ့သားကို ဒုလ္လဘရဟန်း ခုနစ်ရက်လောက် ဝတ်ခွင့်ပြုပါလို့ အနူးအညွတ် တောင်းဆိုတော့တာပဲ”
“တပည့်တော်မကလည်း တဇွတ်ထိုး တစ်ယူသန်ဆိုတော့ တစ်ခါမှ ခွင့်မပြုပါဘူး။ သတိထားမိတာ တစ်ခုကတော့ သူဟာ အဲဒီလို ခွင့်တောင်းလို့ မရတဲ့အခါတိုင်း မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျပြီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုကြွေးတာပါပဲ။ အဲဒီလို အချိန်ကျရင် အသည်းမာတဲ့ တပည့်မတောင် သူ့အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်”
“စိတ်ဆင်းရဲလို့ ထင်ပါတယ်။ အသက် မရှည်ရှာပါဘူး ဘုရား။ ခုနစ်ဆယ် မပြည့်ခင်မှာဘဲ ဆုံးသွားတယ်။ သူဆုံးပြီးတဲ့ အချိန်မှာ တပည့်တော်မကို သုံးကြိမ်တိတိ ဝင်ပူးပြီး လူ့ဘဝက သူ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပြန်ပါတယ်”
“ဘာလဲ၊ သူ့သားကို ဒုလ္လဘရဟန်းခံပေးဖို့လား”
“ဟုတ်ပါတယ် ဘုရား။ သူ့သားကို ရဟန်းခံပေးမှ သူဒီပြိတ္တာဘဝက လွတ်မယ်။ သူ့ကို သနားရင်၊ မိခင်ချင်း ကိုယ်ချင်းစာရင် သူ့ဆန္ဒကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် ဖြည့်ပေးပါလို့ ငိုယိုပြီး ပြောရှာပါတယ်။ ဒီလို သုံးကြိမ်တိတိ ဝင်ပူးပြောတဲ့အခါမှာတော့ သားတစ်ယောက် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ တပည့်တော်မဟာ မိခင်ချင်း ကိုယ်ချင်စာပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဒုလ္လဘရဟန်းခံခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။”
“ရဟန်းခံပွဲမှာ အလှူပေးပြီး အမျှဝေတဲ့အတွက် ကျွတ်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဘာမှ မပြတော့ပါဘူး။ ရတနာသုံးပါးဟာ ပြိတ္တာဘဝ ရောက်နေသူကိုတောင် ကျွတ်လွတ်နိုင်စွမ်း ရှိပါလား ဆိုတာ တပည့်တော်မ ကိုယ်တွေ့ သိလိုက်ရပါတယ်။ နောက် ရဟန်းခံပွဲမှာ ဟောတဲ့ တရားတွေကို နာရပြီး တပည့်တော်မတို့ တစ်အိမ်သားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ”
“အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် မြို့ထဲမှာ နေတုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာပါ။ ရွှေပြည်သာရောက်မှ ဆရာတော် စွန့်ကြဲလိုက်တဲ့ မျက်ရည်မကျခင် သိစေချင်၊ မြန်မာတို့၏အသက် ဆိုတဲ့ စာအုပ်နှစ်အုပ်ကို ဖတ်ပြီးမှ တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ကြတာပါ”
“လူတစ်ယောက်ဟာ အပြေး ဘယ်လောက် မြန်မြန်၊ တစ်ယောက်တည်း ပြေးတာဆိုရင် မြန်မှန်း မသိသာပါဘူး ဘုရား။ တခြား အပြေးသမားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြေးတဲ့အခါကျမှသာ သူအပြေးမြန်တာဟာ ပေါ်လွင်လာပါတယ် ဘုရား။ ဒီဥပမာအတိုင်းပဲ မြန်မာအများစုဟာ မွေးကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာကြပြီး တခြား ဘယ်ဘာသာကိုမှလည်း မလေ့လာဖူးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ တန်ဖိုးကြီးပုံကို သိပ်မသိကြပါဘူး ဘုရား။”
“တပည့်တော်တို့လို ဘာသာခြားကနေ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်လာသူတွေကတော့ ဘာသာနှစ်မျိုးကို အလိုလို ယှဉ်ကြည့်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ တန်ဖိုးကြီးမားပုံ၊ မြင့်မြတ်ပုံတွေကို တကယ် သိနေပါတယ် ဘုရား။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကို အသက်ထက်တောင် တန်ဖိုးထားပါတယ် ဘုရား”
“တပည့်တော်တို့ မိသားစု ရတနာသုံးပါးကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားတယ် ဆိုတာကို ဘာသာခြားဖြစ်တဲ့ တပည့်တော်မရဲ့ ညီမဟာ မသိရှာပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း တပည့်တော်မကို ရတနာသုံးပါးနဲ့ သိန်းနှစ်ဆယ် ကြိုက်တာ ရွေးခိုင်းခဲ့ဖူးတယ်”
“သြော် -- စိတ်ဝင်စားစရာပဲ၊ ဘယ်လို ယှဉ်ပြီး ရွေးခိုင်းတာလဲ ပြောပြပါဦး”
“တပည့်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သွားကတည်းက ဆွေမျိုးအားလုံးက သေခန်းဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေဆီကလည်း ဘာအကူအညီမှ မရတော့ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အလေ့အထကလည်း ကျောင်းကန်ဘုရားကိုသာ လှူတတ်ကြတာ။ ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်တဲ့သူကို စီးပွားရေး အကူအညီပေးတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ် ဘုရား”
“ဒါကြောင့် တပည့်တော်တို့ ရွှေပြည်သာ မြို့သစ်ကို ရောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး ဆင်းရဲ ကြပ်တည်းသွားပါတယ်။ တပည့်တော်မရဲ့ သားလေးဟာ ညီမ မိသားစုရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေပါတယ်။ သးလေး ပို့တဲ့ငွေနဲ့ဆိုရင် တော်တော် ချောင်လည်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် တပည့်တော်မသား ပို့တဲ့ငွေကို တပည့်တော်မတို့က ကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက် ထုတ်ယူလို့ မရဘူး ဘုရား”
“ဟင် - ကိုယ့်သားက ပို့တဲ့ငွေပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူလို့ မရတာလဲ ”
“တပည့်တော်မရဲ့ ညီမက လမ်းစရိတ်ကအစ ကုန်ကျစရိတ် အားလုံးကို စိုက်ထားတာဆိုတော့ ကုမ္ပဏီက ငွေလွှဲပြီဆိုရင် ညီမနာမည်နဲ့ပဲ လွှဲပါတယ်။ အခု တပည့်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်တဲ့အချိန်က စပြီး ညီမဖြစ်သူက သားလွှဲတဲ့ ငွေတွေကို အပိုင်သိမ်းပစ်လိုက်ပါတယ်။ တပည့်တော်တို့ကို မပေးတော့ပါဘူး”
“အို - တရားဥပဒေ မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှ မဟုတ်ဘဲ။ ဒါယိကာမကြီးတို့က တရားမစွဲဘူးလား”
“တရားစွဲကြည့်ပါတယ်၊ သားပို့တဲ့ ငွေကို မရတဲ့အပြင် တပည့်တော်မတို့ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ ငွေလေးပါ ထပ်ကုန်သွားလို့ အခုတော့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကံပဲဆိုပြီး ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ တပည့်တော်မရဲ့ ညီမက တပည့်တော်ကို လှမ်းခေါ်ပြီး ပြောပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်ပြီး အရင်ဘာသာထဲ ပြန်ဝင်ပါ။ သား ပို့ထားတဲ့ သိန်းနှစ်ဆယ်ကျော် တစ်ခါတည်း ထုတ်ပေးမယ်တဲ့ ဘုရား။”
(မှတ်ချက်) ဤဖြစ်ရပ်သည် ၂၀၀၄ ခုနစ်က ဖြစ်၍ သိန်းနှစ်ဆယ်ကျော် တန်ဖိုးသည် မသေးကြောင်း ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်သည်။
“ဒီတော့ ဒါယိကာမကြီးက ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲ”
“သိန်းနှစ်ဆယ် မပြောနဲ့၊ သိန်းနှစ်ရာပေးလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို မစွန့်ဘူးလို့ ပြောပြီး တစ်ခါတည်း ပြန်လာခဲ့တယ်။ တပည့်တော်မဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အသက်ထက် တန်ဖိုးထားလို့ အခုလို ပြောနိုင်တာပါ။ တပည့်တော်တို့ မိသားစု ဆင်းရဲနေတာ တပည့်တော်မ အသိဆုံးပါ။ သမီးနှစ်ယောက် အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ လုပ်တဲ့ လစာလေးနဲ့ပဲ မိသားစုငါးယောက် လောက်အောင် စားနေရတဲ့ ဘဝပါ ဘုရား”
“သမီးလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ လစာကလည်း ဆုကြေးရော ဘာရောပေါင်းမှ တစ်လ ငါးသောင်းဆိုတာ အများဆုံးပါ။ တပည့်တော်နဲ့ အမျိုးသားကလည်း အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ ဘာမှ မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သမီးလေး နှစ်ယောက်ကလည်း တော်ရှာပါတယ်။ သူတို့ လစာနဲ့တင် အိမ်စရိတ် မလောက်မှန်းသိလို့ ငွေလေးသိန်းချေးပြီး ဖိနပ်နဲ့ အထည်စတွေကို အလုပ်သမားချင်း လပေးနဲ့ ရောင်းပါတယ်”
“ရောင်းတော့ ရောင်းရပါတယ် ဘုရား။ ဒါပေမယ့် အတိုးပေးရတာက များတယ် ဘုရား။ တစ်ရာ တစ်ဆယ်တိုးဆိုတော့ တစ်လပြည့်တိုင်း အတိုးက လေးသောင်း ပေးနေရတော့ မြတ်တဲ့ အမြတ်ကလေးက ကိုယ်မသုံးရဘဲ အတိုးထဲ ပါသွားတာပေါ့ ဘုရား”
ဒါယိကာမကြီးသည် စာရေးသူ မေးသဖြင့် သူ့ရင်ထဲ ရှိသည့်အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးကဲ့သို့ ရတနာသုံးပါးကို ငွေထက် တန်ဖိုးထားသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ရှိကြောင်း လက်တွေ့ မြင်ရသည့်အတွက် အားတက် ဝမ်းမြောက်မိသည်။ အနားတွင် ထိုင်လျက်ရှိသော ကပ္ပိယဖြစ်သူ ညီတော်မောင် စိုးတင့်အား ငွေလေးသိန်း ထုတ်ခိုင်းပြီး သူတို့မိသားစုကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည်။
ယခု ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ကား သူတို့သည် ရွှေပြည်သာမြို့၌ ဆန်ဆီ ကုန်စုံဆိုင်ကြီးဖွင့်ကာ ရောင်းချနိုင်သော အဆင့်သို့ ရောက်နေလေပြီ။ ထိုသို့ ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်လည်း စာရေးသူ၏ နဝကမ္မထဲက ဆယ်သိန်းကျပ်ကို အတိုးမဲ့ စိုက်ထုတ်ကူညီခဲ့ပေသည်။ အပေါ်ယံကြည့်လျှင် ထိုမိသားစု ငွေလေးသိန်း ရသွားခြင်းသည် စာရေးသူက ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ နက်နဲစွာ ကြည့်လျှင်ကား ရတနာသုံးပါးကို ကြည်ညိုသော သူတို့၏ စေတနာက ပေးခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဆရာတော် အရှင်ဇဝန (မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ) ရေးသား ထုတ်ဝေသော လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက် စာအုပ်ထဲမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
# Posted by စေတနာရှင် on ဒီဇင်ဘာ 22, 2009 at 2:49am
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 4:59 AM0comments
Buddha and Christian ion
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 12:20 AM0comments
သူငယ်ချင်း အာကာပို့ ပေးတာကို ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ။
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:09 AM0comments
"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" (အာကာ)သို့ ကျေးဇူးတင်စကား
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:04 AM0comments
ကြွရောက်လာကြတဲ့ ပါမောက္ခများ၊ ဆရာ ဆရာမများ၊ စာပေ၀ါသနာရှင်များ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား များကို အခုလို မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ ရင်းနှီးစွာ စကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင် ၀မ်းမြောက်တယ်ဆိုတာ ပထမဦးစွာ ပြောကြားလိုပါတယ်။ (သြဘာသံများ)
ဒီကနေ့ည ကျမ ဟောပြောဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်က 'ကျမ တော်တော်ညံ့ခဲ့ပါတယ်' ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်ကို ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဒီစာပေဟောပြောပွဲကို တကူးတကန့် လာရောက်နားထောင်လိုတဲ့ ပရိသတ်အနေနဲ့ အံ့သြချင် အံ့သြမိမယ်။ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ရီမိချင် ရီမိလိမ့်မယ်။ ဒီစာပေဟောပြောပွဲကို လာပြီးတော့ နားထောင်တာဟာ နင်တို့တွေ၊ ခင်ဗျားတို့တွေဆီက တော်တာတွေများ ကြားရမလား၊ အဲဒီမျှော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့ လာပြီးနားထောင်တာ၊ ညံ့တာတွေတော့ ငါတို့ မကြားချင်ဘူး၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ရီမိချင် ရီမိလိမ့်မယ်။ ကျမကလဲ ကျမ သိတ်တော်တဲ့အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံဆိုးချင်တော့ ကျမဟာ ဘ၀မှာ တခါမှ မတော်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူး။ (အော်ဟစ်သံများ)
ဒီတော့ ကျမ ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညံ့နေတာပဲတွေ့တော့ ကျမရဲ့ ပရိသတ်ရှေ့မှာ ကျမညံ့တဲ့အကြောင်းကိုပဲ ၀န်ခံတာဟာ ရိုးသားမှု အရှိဆုံး ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျမ တွေးပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလို စင်မြင့်ပေါ် တက်လာပြီး တော့ ကျမညံ့တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောရတာ ကျမ အများကြီး ၀မ်းလဲနည်းမိပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ) ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ပါဘူး၊ ကျမ ညံ့တဲ့အကြောင်းကတော့ ပြောရမှာပဲ။
ကျမကတော့ ညံ့တဲ့အကြောင်းတခုပဲ ပြောစရာ ရှိလို့ပါ။ ဒီတော့ အဲဒီလို စိတ်ပျက်နေတဲ့သူ၊ ဒေါသထွက် နေတဲ့ သူတွေအတွက် ကျမ အကြံကောင်းလေးတခုတော့ ပေးနိုင်ပါတယ်။ တော်တာတွေကို မြင်ချင် ကြားချင်ရင်တော့ စာပေဟောပြောပွဲကို လာစရာမလိုပါဘူး။ တော်တာတွေကို မြင်ချင်ကြားချင် ဂုဏ်ယူချင်တယ် ဆိုရင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကို ကြည့်ကြပါ။ (အော်ဟစ် လက်ခုပ်သံများ) အခုအချိန်က စပြီးတော့ 'ဂျူး' ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေကို ၀န်ခံပါတော့မယ်ရှင်။
ရေနံချောင်းသူဆိုတော့ ကျမတို့ ရေနံမြေကနေ ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာ ရေနံတူးစင်ကြီးနဲ့ ရေနံတူးနေတာ တွေ၊ တူးပြီးသား ရေနံတွင်းတွေကနေ ပိုက်လုံးတွေနဲ့ မောင်းတံတွေနဲ့ စုပ်ယူပြီးတော့ ရေနံလှောင်ကန်ထဲ ထည့်နေတာတွေ ကျမ မျက်မြင်ကိုယ်တွေပါပဲ။ အဲ့ဒီ ရေနံလှောင်ကန်တွေထဲက များပြားလှတဲ့ ရေနံတွေ ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာတော့ ကျမက မမြင်ရဘူးပေါ့။ (လက်ခုပ်သံများ) ကျမ မြင်ရတာက ရေနံလှောင်ကန်ပဲ မြင်ရတာကိုး။ အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒါ ရေနံနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အပိုင်းပါ။ နောက်ထပ် သံယံဇာတတွေ အများကြီး ထွက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဥပမာ တွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ ကျောက်မီးသွေးလဲ ထွက်ပါတယ်။ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ ရွှေ၊ ရွှေကြောကြီးတွေလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ အပြင် ကျောက်မီးသွေး၊ ခဲမဖြူတို့၊ အဖြိုက်နက်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မထွက်တဲ့ တွင်းထွက်ဆိုတာ မရှိသလောက် အများကြီး ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မြန်မာ့ပိုင်နက် ပင်လယ်ရေပြင်ဆိုတာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပင်လယ်ပြင်ကထွက်တဲ့ ငါးပုစွန်တွေဟာ မြန်မာပြည်သူလူထု စားသုံးလို့တောင် မကုန်တဲ့အတွက် စည်သွတ်ဗူး တွေနဲ့ ဒါမှမဟုတ် ရေခဲရိုက်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားကိုတောင် တင်ပို့ရောင်းချလို့ ရပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ တတိယတန်း ကျောင်းသူ ကျမဟာ ကျမနိုင်ငံကို ကျမ တော်တော် ဂုဏ်ယူခဲ့ပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ) သယံဇာတတွေ သိပ်များတာပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် တနေ့ကျတော့ ကျမက ကျောင်းစာအပြင် တခြားပြင်ပမဂ္ဂဇင်းတခုကို သွားဖတ်မိပါတယ်။ သွားဖတ်တော့ အဲဒီအချိန်မှာ ကျမ စာတော့ ဟုတ်တိပတ်တိ မဖတ်ဖူးသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးတို့ ပုံပြင်တို့ဆိုရင် တကြောင်းစ နှစ်ကြောင်းစ ဖတ်တတ်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီမှာ ကံဆိုးစွာနဲ့ စာကြောင်းလေးတကြောင်း သွားတွေ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ စာကြောင်းလေးကို ကျမ အခုထိ မမေ့နိုင်သေးပါဘူး။'မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံများတွင် တတိယမြောက် လိုက်ပါသည်တဲ့'။ (အော်ဟစ်သံများ၊ လက်ခုပ်သံများ)
ကျမတို့ ရေနံချောင်းမှာ တရုတ်လူမျိုးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျမတို့ ရေနံချောင်းက တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ ဗမာလူမျိုးတွေတော့ မချကြပါဘူး။ ကျမတို့ အချင်းချင်းတော့ ခင်ခင်မင်မင်ပါပဲ။ ကျမတို့ ကျောင်းမှာ အတန်းထဲမှာ ကျမတို့နဲ့ စာပြိုင်ဖက် တရုတ်မလေး ၃ - ၄ ယောက် ရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ကျမတို့လဲ စာမေးဖော် မေးဖက် ရင်းရင်းနှီးနှီး ခင်ခင်မင်မင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တရုတ်-ဗမာ အရေးအခင်း ဖြစ်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့လဲ လက်ခံလိုက်ရုံပဲပေါ့။ တရုတ်တွေနဲ့ ဗမာတွေ ချကုန်ပြီ၊ ဒီလောက်ပဲ သဘောထားလိုက်ပါတယ်။ တရက်တော့ ကျမတို့ ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆရာမက ကျမတို့ကို ပြောပါတယ်။ တို့တတွေ မနက်ဖန် ရောက်လို့ရှိရင် ဒီမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးတန်းစီ လမ်းတလျှောက် ချီတက်ရမယ်တဲ့ (လက်ခုပ်သံများ) အဲဒီတော့ ကျမက ကျောင်းစာသင်တဲ့အချိန်မှာ အပြင်ထွက် ရမယ်ဆိုတော့ သိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ (ရီသံများ) အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကျမတို့ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ပဲ လိုက်ဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။ ဆရာမက ပြောတယ်။ နင်တို့အားလုံး စည်းကမ်းရှိရှိ သေသေ၀ပ်ဝပ် ချီတက်ရမယ်နော်တဲ့။ နှစ်ယောက်တတွဲ တွဲလို့ရတယ်။ နင်တို့ ကြိုက်တဲ့လူနဲ့ နင်တို့ တွဲကြပါတဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျမကလဲ ကျမရဲ့ လက်တွဲဖော်အဖြစ် တရုတ်မလေးကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ကျမနဲ့ ကျမသူငယ်ချင်း တရုတ်မလေးဟာ တရုတ်ဗမာအရေးအခင်း မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံဖို့ မြို့ထဲမှာ ချီတက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ (ရီသံများ လက်ခုပ်သံများ) အဲ့ဒီတော့ ကျမတို့က ၂ ယောက်တတွဲ လမ်းလျှောက် လမ်းတွေပေါ်မှာ ချီတက်ကြတယ်။ ရိုးရိုးတန်းတန်း ချီတက်ကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ရှေ့က တယောက်က စာရွက်တွေနဲ့ တိုင်ပေးတယ်။ ကျမတို့က နောက်ကနေပြီး လိုက်အော်ရတယ်။ လိုက်အော်တော့လဲ တို့အရေး၊ တို့အရေး ပေါ့။ ရှေ့က ဘာအောသလဲတော့ ကျမတို့ ကောင်းကောင်း မကြားရဘူး။ (ရီသံများ) အဲ့ဒီလိုနဲ့ ရှေ့ကတယောက်က တိုင်ပေးလိုက်၊ ဘာမှမသိပဲ နောက်က တို့အရေး အော်လိုက်၊ အော်ရင်းနဲ့ပဲ လမ်းတကာကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျမတို့ ကျောင်းသားတွေကို လမ်းလျှောက်ရတာ၊ အော်ရတာ မောရင် ရေသောက်ရအောင်၊ အအေးသောက်ရအောင် ဆိုပြီးတော့ အိမ်တွေကနေပြီး အိမ်ရှေ့မှာ စာပွဲလေးတွေ ခင်းပြီးတော့ ကျမတို့ကို အစားအစာတွေ ကျွေးမွေးပါတယ်။ ကျမတို့လဲ အလကားရတာမှန်သမျှ အကုန်စားပါတယ်။ (ရီသံများ) အကျင့်က ပါနေတာကိုး (ရီသံများ)
ဗမာက ကျွေးကျွေး၊ တရုတ်က ကျွေးကျွေး အကုန်စားပါတယ်။ (ရီသံများ) ဒီလိုနဲ့ပဲ နည်းနည်း နေမြင့်လာတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ ကျောင်းကို ပြန်ရပါတယ်။ ကျောင်းရှေ့မှာ အင်မတန် ကျယ်ဝန်းတဲ့ မြေတလင်းပြင်ကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အားလုံးစုရုံးပြီးတော့ အတန်းလိုက် အတန်းလိုက် ကိုယ့်လူစုနဲ့ကိုယ် စုရုံးကြပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျမတို့ ဆရာမက ဘာပြောလဲဆိုတော့၊ အော်... ကျမ မေ့နေလို့၊ ကျမတို့ လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါမှာ ဒီအတိုင်း လက်လွတ်လျှောက်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ 'ခေါင်း' ကြီးတွေကို ကြိုးနဲ့ ဆွဲပြီးတော့ ဒီ ခေါင်းကြီးတွေကတော့ ကျမတို့ ကျောင်းသားလေးတွေ ဆွဲနိုင်အောင်ပါ။ စက္ကူတွေနဲ့လဲ ခေါင်းပုံစံ ဖြစ်အောင် ရေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာလဲ ကျမတို့ မျက်စိရှေ့မှာ စက္ကူစုတ်တွေ ထည့်ထားတာ မြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ စက္ကူစုတ်တွေကို ကျမတို့က စက္ကူစုတ်တွေလို့ မမှတ်ရဘူးတဲ့။ အဲဒီအထဲမှာ အလောင်းတွေ ပါတယ်လို့ မှတ်ရမယ်တဲ့။ အဲ့ဒီမှာမှ ကျမ ပထမဦးဆုံး နံမည်တခုကို ကြားဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီနာမည်ကတော့ မော်စီတုန်းတဲ့။ မော်စီတုန်းဆိုတဲ့နာမည်ကို အဲဒီအချိန်မှာမှ ပထမဦးဆုံး ကြားဖူးတာပါ။ မော်စီတုန်း ကျဆုံးပါစေ ပေါ့။ အဲ့ဒီလို ဆိုတယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းရှေ့ကို ပြန်ရောက်တော့ ကျမတို့ ဆရာမက အဲဒီ ခေါင်းကြီးကို မီးရှို့ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့ ကျမက သူများအော်ရင်သာ နောက်ကနေ တို့အရေး လိုက်အော်ရဲတာ။ ကျမကတော့ မီးရှို့ဖိုတော့ ကြောက်ပါတယ်။ ကြောက်တော့ ကျမက နောက်ဆုတ်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဆရာမက ကျမကို ရှေ့ထွက်ခိုင်းတယ်။ ကျမက အတန်းရဲ့ မော်နီတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ရီသံများ)
"တင်တင်ဝင်း နင်ရှေ့ထွက် နင်မီးရှို့ ရမယ်" လို့ ပြောတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမက မရှို့ရဲဘူးဆိုပြီး နောက်ကို ကပ်တယ်။ အဲဒီတော့ ကျမတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မကြည့်ရက်တဲ့ နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ ကျောင်းသူတယောက်က ကျမတို့နှစ်ယောက် ကိုယ်စား ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူပဲ ဆက်ပြီးတော့ မီးရှို့တယ်။ (ရီသံများ) ကျမဟာ ဒီလို နိုင်ငံရေးမရှိအောင် ညံ့တယ်ဆိုတာ ကျမ ၀န်ခံပါတယ်။ ဒါ ကျမရဲ့ စီးပွါးရေး ညံ့ဖျင်မှု၊ နိုင်ငံရေး ညံ့ဖျင်းမှုပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုသာ ညံ့တယ်။ ကျမက ဘာဖြစ်ချင်သလဲဆိုတော့ ကျမဘ၀မှာ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒတခုက စာရေးဆရာ ဘ၀တခုပါပဲ။ စတုတ္ထတန်းအရွယ် ကတည်းက ကျမဟာ စာရေးဆရာတယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာဖြစ်ဖို့ ကျမကို တွန်းအားပေးတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျမ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေပါပဲ။ ကျမဟာ ကျောင်းစာက လွဲပြီးတော့ အပြင်ဘက်စာပေတွေကို မဂ္ဂဇင်းတွေကို အများ ဖတ်ခဲ့ ပါတယ်။ ကျောင်းစာထက် ပိုပြီးတော့ ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမ မှတ်မိသလောက်ပေါ့၊ ကျမ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေဟာ အများကြီးပါပဲ။ စာရေးဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၊ စာရေးဆရာကြီး ဓူဝံ၊ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းယု၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး၊ သူတို့ စာအုပ်တွေကို ကျမ ဖတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျမဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံး ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို အခုထိ မှတ်မိပါတယ်။ ဒါဟာ ကျမအတွက် ပထမဦးဆုံး ၀တ္ထုပါ။ အဲ့ဒါကတော့ စာရေးဆရာကြီးဓူဝံရဲ့ 'မာလာ' လို့ အမည်ရတဲ့ ၀တ္ထု ဖြစ်ပါတယ်။ 'မာလာ' ဟာ လက်သုံးလုံးလောက် ထူတဲ့ စာအုပ်ကြီးတအုပ်ပါ။ သူ့ အဲ့ဒီစာအုပ်ကို ကျမရဲ့ ကျမကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ ဖတ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျမက ကာတွန်းတွေပဲ ဖတ်ပါတယ်။ ကာတွန်းတောင်မှ ထူရင် မဖတ်ပါဘူး။ ခပ်ပါးပါးပဲ ဖတ်ပါတယ်။ တရက်ကျတော့ ကျမ စတုတ္ထတန်း စာမေးပွဲအပြီး ကျောင်းအားတဲ့ အချိန်မှာ ကျမ မေမေက စာအုပ်တအုပ် ယူလာပေးပါတယ်။
"သမီး ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်စမ်း" လို့ ကျမကို ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီဝတ္ထုက 'မာလာ' ၀တ္ထုပါ။ ကျမက စာအုပ်ကြီးကို ကြည့်ပြီးတော့ လန့်သွားတယ်။ "အား စာအုပ်ကြီးက အထူကြီးပါလားမေမေ" လို့ ပြောတော့ "အေး ထူတော့ ထူတယ်၊ ဒါပေမယ့် သမီး စိတ်ဝင်စားမှာပါ" တဲ့။ သမီးတို့ မောင်နှမတွေဟာ စကားပြောရင် အင်မတန် ရိုင်းတယ်တဲ့။ ကိုကိုရယ်၊ ညီမလေးရယ် ဘယ်တော့မှ စကားမပြောဘူး၊ မောင်နှမအချင်းချင်း အကြီးနဲ့အငယ်ကို နင်, ငါ သုံးတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါ မကောင်းဘူးတဲ့၊ ဒီတော့ သမီး ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ ဖတ်ပြီးသွားရင် သမီး ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လာလိမ့်မယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ လူတွေဟာ စကားပြောရင် သိပ်ယဉ်ကျေးတာပဲတဲ့။ ဖတ်ကြည့်ပါတဲ့။ အဲ့ဒီတော့ ကျမကလဲ မေမေက ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုရင် ငါဖတ်ဖို့ သင့်တာပေါ့။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် တွေးပြီးတော့ မေ့မေ့ရှေ့မှာပဲ အဲ့ဒီစာအုပ်ကို ကျမ ဖွင့်ဖတ် လိုက်ပါတယ်။ စ ဖွင့်ဖွင့်ချင်းပဲ အဲ့ဒီစာအုပ်ကို ကျမ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ သူက အခန်း(၁) အဖွင့်မှာ အကျဉ်းထောင်တခုရဲ့ မြင်ကွင်းနဲ့ စထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ၊ အချုပ်ခန်းထဲမှာ၊ သံတိုင်တွေနောက်မှာ အကျဉ်းသား ၁၀ ယောက် အကျဉ်းကျ နေပါတယ်။ သူတို့ကတော့ တိုင်းပြည်ကို တော်လှန်ပုန်ကန်လို့ ချုပ်ထားတဲ့ အကျဉ်းသား တွေပါ။ တယောက်က ခေါင်းဆောင်၊ အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နာမည်က ဗိုလ်နန္ဒလို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ နောက်ပါက ၉ ယောက် ရှိပါတယ်။ သူတို့ ၁၀ ယောက်ကို ဒီကနေ့ ညနေ နေကွယ်လို့ ရှိရင် လည်ပင်းကို ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး၊ မသေမချင်း ကြိုးပေးသတ်ခံရဖို့ ဘုရင်က အမိန့် ချပြီးသားပါ။ ဒီတော့ သူတို့ အားလုံးဟာ ဒီကနေ့ ညနေမှာ သေမယ်ဆိုတာ သေချာနေတော့ တော်တော် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေပါတယ်။ တပည့်တွေဟာ ငိုတဲ့သူက ငိုနေကြတယ်။ နံရံကို လက်သီးနဲ့ထိုးပြီး အော်တဲ့သူက အော်နေကြတယ်။ နောက် ဒေါသတကြီး စကားပြောတဲ့သူက ပြောနေကြတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်နန္ဒက တော်တော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်တယ်။ "သူတို့ခမျာ ငါ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့ဟာ ကြိုးပေးပြီး အသတ်ခံရတော့မှာပါလား၊ သူတို့တွေ အသေဖြောင့်အောင်၊ သေခြင်းတရားကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရင်ဆိုင်နိုင် အောင် ငါ ကဗျာလင်္ကာတပုဒ် ရွတ်ပြမှ ဖြစ်မယ်" လို့ သူ့ဖာသာသူ တွေးပြီးတော့ သူ ကဗျာလင်္ကာတပုဒ် ရွတ်ပြပါတယ်။ အဲ့ဒီကဗျာကတော့ အနန္ဒသူရိယ အမတ်ကြီး ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ အမျက်ဖြေ အလင်္ကာလို့ အမည်ရတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်ပါ။ "သူတည်းတယောက်၊ ကောင်းဖိ်ု့ရောက်မူ၊ သူတယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာ၊ ဓမ္မတာတည်း" အဲ့ဒီကဗျာပါ။ သူက အဲ့ဒီကဗျာကို ရွတ်တဲ့အခါမှာ စာရေးဆရာက ဘယ်လိုဖွဲ့ထားသလဲဆိုတော့ ဗိုလ်နန္ဒသည် သူ၏ အောင်မြင်လှသော အသံဝါကြီးနဲ့ထိုကဗျာကို ရွတ်ဆို၏တဲ့။ အဲ့ဒီမှာ ကျမက နည်းနည်း ကလေး နားမလည်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဗိုလ်နန္ဒကို ကျမသိတာက သူပုန်ဗိုလ်လို့ ကျမသိပါတယ်။ သူပုန်ဗိုလ် တယောက်ကို ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ဒီလို ဖွဲ့သလဲ အောင်မြင်လှသော အသံဝါကြီးဆိုတာ သူပုန်ဗိုလ်ကို ဖွဲ့ရမယ့် စကားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သူရဲကောင်းတွေ ဟီးရိုးတွေကိုသာ သုံးရမယ့် စကားပါ။ ဒီတော့ ကျမအမြင်မှာ သူပုန်ဗိုလ်ဆိုတာ လူဆိုးပဲ၊ လူဆိုးတယောက်ကို အောင်မြင်လှသော အသံဝါကြီးနဲ့လို့ ဖွဲ့တာဟာ နည်းလမ်း မကျဘူးလို့ ကျမရဲ့ စတုတ္ထတန်း အမြင်နဲ့ တွေးပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ မေမေ့ကို မေးမိတယ်။ မေမေလို့ ဗိုလ်နန္ဒဟာ ဘာလဲလို့၊ အဲ့ဒီလို မေးတော့ မေမေက ဇာတ်လိုက်တဲ့၊ (ရီသံများ) ကျမပိုပြီးတော့ နားမလည်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ (ရီသံများ) သူပုန်ဗိုလ်လို့လဲ ပြောသေးတယ်၊ ဇာတ်လိုက်လို့လဲ ပြောသေးတယ်၊ ကျမ အဲ့ဒီမှာ အဲ့ဒီနှစ်ခုကို ယှဉ်ပြီး နားမလည်ဘူးပေါ့။ ကျမ အပြင်မှာ သူခိုးတွေ၊ ဓါးပြတွေ၊ သူပုန်တွေ၊ ခါးပိုက်နှိုက်တွေ၊ အဲ့ဒါတွေ အကုန်လုံးက လူဆိုးတွေ စာရင်းထဲမှာ ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလူဆိုးတယောက်က ဘာဖြစ်လို့ ဇာတ်လိုက်ဖြစ်သလဲ ကျမက မေမေ့ကို ပြန်မေးတယ်။ မေမေလို့ မေမေ့ဥစ္စာက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား၊ သူပုန်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ ဇာတ်လိုက် ဖြစ်မလဲ၊ မဖြစ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်လို့ ကျမကပြောတော့ မေမေက ဖြစ်နိုင်တာပေ့ါ သမီးရယ်တဲ့၊ တခါတခါကျတော့ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ ရှင်ဘုရင်က ဆိုးနေရင်၊ ယုတ်မာနေရင်၊ ကောက်ကျစ်နေရင် သူပုန်ဆိုတာလဲ ဇာတ်လိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့။ (ရီသံများ၊ လက်ခုပ်သံများ)
အဲ့ဒီတော့မှ ကျမ ရေးရေးလေး သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ ကျမ ဒီဝတ္ထုကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားသွားပြီ၊ ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီးတော့ မေးသေးတယ်၊ ဟုတ်ပါပြီလို့ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီသူပုန်ဗိုလ်က ဇာတ်လိုက်ဖြစ်နေရတာ သူက ဘာဖြစ်လို့ သူပုန်ဘ၀ကို ဘာဖြစ်လို့ ရောက်သလဲ မေမေလို့ ကျမက ပြန်မေးတယ်။ ပြန်မေးတော့ မေမေကလည်း သူ့သမီးကို စာဖတ်စေချင်တော့ ရှင်းပြတယ်၊ သူ့ဘ၀တဲ့၊ သူကတော့ သူပုန်ဘယ်ဟုတ်မလဲ သမီးရယ်တဲ့၊ သူက ဘုရင့်သားတော် တပါးပါ၊ သူတက္ကသိုလ်ပြည်မှာ ပညာသွားသင်နေတုန်းက သူ့အဖေရဲ့ ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို သူ့အဖေလက်အောက်က စစ်သူကြီးတပါးက တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ သိမ်းယူထားတဲ့အတွက် သူဟာ ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ သူပုန်ဘ၀ကို ရောက်ရတာပါတဲ့။ (လက်ခုပ်သြဘာသံများ) အဲ့ဒီလို ပြောပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ) အဲ့ဒီတော့ ကျမက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်၊။ ဟုတ်ပါပြီမေမေ အဲ့ဒါဆိုရင် သမီး ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်ပါတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် သမီး ဒီဇာတ်လမ်းအဆုံးကို သိပ်သိချင်တာလို့၊ အဲ့ဒီ ဇာတ်လမ်းအဆုံးကိုတော့ သမီးကို ကြိုပြီးတော့ ပြောပါအုန်းလို့။ သူက သူ့အဖေရဲ့ ထီးနန်းစည်းစိမ်ကို ပြန်ရရဲ့လားလို့ ကျမ မေးလိုက်တယ်။ ကျမမေးလိုက်တော့ မေမေက ရတယ် သမီးတဲ့။ နောက်ဆုံးကျတော့ သူရသင့်တဲ့ သူ့အဖေရဲ့ စည်းစိမ်ကို သူပြန်ရသွားပါတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီလို ကျမကို ပြောပါတယ်။ (ရီသံများ၊ လက်ခုပ်သံများ) အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကျမ ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြိုက်လို့ ဒီဝတ္ထုကို ဖတ်ပါတယ်။ တကယ်လဲ မေမေပြောသလိုပဲ သူပုန်ဗိုလ်နန္ဒဟာ သူရသင့်ရထိုက်တဲ့ သူ့အဖေရဲ့ ဒီနန်းစည်းစိမ်ကို ပြန်ရသွားပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သူထီးနန်းစည်းစိမ်ကို ပြန်ရသွားလဲ၊ အဲ့ဒါကို သိချင်ရင်တော့ ဓူဝံရဲ့ 'မာလာ' စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ (လက်ခုပ်သံများ) အဲ့ဒါ ကျမရဲ့ စာရေးဆရာ ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အစပါပဲ။
ကျမဟာ လူတွေကို စရိုက်အမျိုးမျိုး ရေးဖွဲ့ချင်တယ်။ လူဆိုးဆိုလဲ လူဆိုးစရိုက်၊ လူကောင်းဆိုရင်လဲ လူကောင်းစရိုက် အဲ့ဒီလို ရေးဖွဲ့တော့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆင်ချင်တယ်။ အမှန်တရားဟာ ရှေ့မှာ ရောက်သင့်တဲ့ အချိန်မှာရှေ့မှာ ရောက်ဖို့ ကျမက ထည့်ချင်တယ်။ အဲ့ဒီလို စိတ်လေးတွေဟာ ၀တ္ထုတွေ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းကနေပြီး ကျမကို ပိုပို ပိုပို တွန်းအားပေးလာတော့ ကျမဟာ စာရေးဆရာ ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်တခုထဲနဲ့ ကျမဟာ ကြီးပြင်းခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အခါ ခြေချော် လက်ချော်နဲ့ ဂုဏ်ထူး ၅ ခု ရသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အဲဒီဂုဏ်ထူး ၅ ခုလေးကို ကျမက နှမျောပြီးတော့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကို လိုက်ပါတယ်။ (ရီသံများ) ကျမတို့ ခေတ်တုန်းက ဂုဏ်ထူး ၆ ခုတွေ၊ ၅ ခုတွေ၊ ၄ ခုတွေ အများကြီးပါပဲ။ သူတို့တွေ အားလုံးဟာ ဆေးတက္ကသိုလ်ကိုဝင်ဖို့ပဲ အာရုံရှိကြပါတယ်။ ရူပဗေဒ၊ ဓါတုဗေဒတွေကို မ၀င်ကြပါဘူး။ မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ၀င်စေချင်တယ်။ ကျမကိုယ်တိုင်ကလဲ ကျမရဲ့ မိဘတွေက ဆေးတက္ကသိုလ်ကို လိုက်ဖို့ ပြောလို့ ကျမကလဲ ဂုဏ်ထူးလေးကို အားနာလို့ ဆေးတက္ကသိုလ်ကို ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ ၀င်ခဲ့တော့ ကျမဟာ ဆရာဝန်ဘ၀ကို လုံး၀၀ါသနာ မပါပဲ ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ အတန်းထဲမှာ ဆေးပညာကလွဲရင် အားလုံးကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ (ရီသံများ)
ကျမ တနေ့တနေ့ ဖတ်တဲ့ စာတွေဟာ ဆေးပညာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ကျမတို့ ရေနံချောင်းမှာ စာကြည့်တိုက် ကောင်းကောင်း မရှိဘူး၊ ဆေးကျောင်း ရောက်တော့ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ်မှာ အင်မတန် ကြီးမားတဲ့ စာကြည့်တိုက်ကြီးတခု ကျမသွားတွေ့တယ်။ အဲ့ဒီ စာကြည့်တိုက်ကြီးထဲမှာ ကျမ မဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ကြားဖူးပြီးတော့ မဖတ်ဖူးတာ၊ ကြားတောင် မကြားဖူးတာ၊ မြန်မာလို အင်္ဂလိပ်လို အစုံပါပဲ။ အဲ့ဒါကြီးကို ကျမ မြင်ပြီးတော့ ငါတော့ ဒီ ဆေးတက္ကသိုလ် ၇ နှစ် အတွင်း ဒီစာအုပ်တွေ ပြီးအောင်ဖတ်မှ ဖြစ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျမ အပြင်စာတွေ ဖတ်ခဲ့တယ်။ အတန်းထဲမှာ စာသင်တဲ့အခါမှာ ကျမက နောက်ဆုံးကနေ မတ်တတ်ရပ်ပါတယ်။ ဆရာ စာမေးလွတ်အောင်လို့ပါ။ ရှေ့မှာ ရပ်လို့ရှိရင် ဆရာက လှမ်းလှမ်းပြီး စာမေးလို့ပါ။ စာသင်ရတဲ့အခါမှာလဲ ကျမ အားကျစိတ် လုံးဝမပေါ်ပါဘူး။ ကျမတို့ ကျောင်းမှာ ရောဂါနံမည်တွေ၊ ကုထုံးနာမည်တွေ အဲ့ဒါတွေ အားလုံးဟာ လူနံမည်တွေနဲ့ ချည်းပါပဲ။ ဥပမာ ရောဂါတခုခုကို တယောက်ယောက်က ရှာတွေ့သွားပြီဆိုရင် အဲ့ဒီလူရဲ့ နာမည်ကို ရှေ့မှာတပ်ပြီးတော့ နံမည်နဲ့ ရောဂါနံမည် ပေးပါတယ်။ ဥပမာ ကော့ ဆိုတဲ့သူက ရောဂါတခုကို ရှာဖွေတွေ့ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ ကော့ ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ အဆုပ်ရောဂါကို ကော့ Lung ကော့ဒစိပေါ့။ ကော့ရဲ့ရောဂါလို့ နံမည် တပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပဲလော့ လို့ခေါ်တဲ့ ပြင်သစ်သမားတော်ကြီး တယောက်က ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ ရောဂါ၊ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ၊ အဲ့ဒါဆိုလို့ ရှိရင် ပဲလော့တက်ထွာလော်ဂျီလို့ သူတို့က နံမည်ပေးပါတယ်။ ပဲလော့ ရှာတွေ့ခဲ့သော ရောဂါ၊ အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ ထောင်ပေါင်း၊ သောင်းပေါင်းများစွာ နေ့စဉ် ကျမတို့ စာကျက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ကျက်နေတဲ့အခါမှာ ဒီနံမည်တွေကို ကျက်ပြီးတော့ ငါသူတို့ ဘ၀ကို အားကျလိုက်တာ ဆိုတဲ့စိတ်များ ၀င်ခဲ့မိသလားလို့ အခုနေ ကျမပြန်တွေးကြည့်တော့ ကျမ နည်းနည်းမှ အားကျစိတ် မ၀င်ခဲ့ပါဘူး။ တခါတခါ သူတို့ကို ငြိုတောင်ငြိုငြင် မိပါတယ်။ သူတို့ဟယ် ရှာလိုက် ဖွေလိုက်ကြတာ၊ တွေ့ပဲ တွေ့နိုင်လွန်းတယ်၊ သူတို့ ရှာပြီးတော့ တွေ့တော့ ငါတို့မှာ စာတွေ ကျက်လို့ကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ (ရီသံများ၊ လက်ခုပ်သံများ) အဲ့ဒီလောက်ထိအောင် ကျမ မေတ္တာပို့ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ ကျမ ဆေးကျောင်းသူဘ၀ ညံ့ဖျင်းမှုတွေပါ။
ဒီလိုနဲ့ တနှစ်ပြီး တနှစ် ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ စာမေးပွဲတွေ နီးတော့ စာလေးကျက်လိုက်၊ အောင်လိုက်၊ တခါတလေ တခါတည်းနဲ့ မအောင်လို့ နှစ်ခါပြန် ဖြေရပါတယ်။ ကျမတို့ ကျောင်းမှာတော့ ဆပ်ပလီမန်ထရီဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဆပ်ပလီမန်ထရီက စာမေးပွဲ ကျပြီးတော့ ကျတဲ့ဘာသာကိုပဲ ပြန်ဖြေရတာပါ။ တော်ပါသေးရဲ့ ဆပ်ပလီမန်ထရီသာ မရှိခဲ့ရင် ကျမ တတန်းနှစ်နှစ် လောက် နေရဖို့ အကြောင်းရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကျမ ဆရာဝန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်လာတော့ ဒီလို ခပ်ညံ့ညံ့ ဆေးကျောင်းသူတယောက်က ဘယ်လိုဆရာဝန်မျိုးဖြစ်မလဲ။ တွေးကြည့်ရင်တော့ သဘောပေါက်နိုင်စရာ အကြောင်းရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျမရဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀ကို ပိုပြီးတော့ ပုံပေါ်သွားအောင်၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ပိုပြီးတော့ နားလည်သွားအောင် ကျမ ကာတွန်းလေးတပုဒ်နဲ့ ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာတွန်းလေးကို ရေးဆွဲတဲ့သူ ဘယ်သူလဲလို့ ကျမ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကျမညံ့တဲ့အထဲမှာ အဲ့ဒါလဲ ပါပါတယ်။ ကျမက ဆရာအော်ပီကျယ်ကို တောင် မေးကြည့်ပါသေးတယ်။ ကာတွန်းဟာ ကျမ အခုထိ သတိရနေသေးတယ်ဆရာလို့ ဆရာများ ဆွဲခဲ့ သလားလို့ ကျနော် မဆွဲခဲ့ ပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျမရင်ထဲမှာ အဲ့ဒီ ကာတွန်းလေးဟာ အခုချိန်ထိ နှစ်ပေါင်းများစွာ စွဲတင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ အော် ငါနဲ့ တူလိုက်လေခြင်း၊ အဲ့ဒီ ကာတွန်းအတွေးလေးကို ကျမ ပြောပြမယ်။ သူက တမျက်နှာ ကာတွန်းပါ။ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံ၊ မဂ္ဂဇင်းမှာ တမျက်နှာ ၄ ခု လောက်ပါတယ်။ တခါတလေ ၆ ခုလောက်ပါတယ်။ အခု ကျမကာတွန်း အကွက် ၆ ကွက်ပါတဲ့ ကာတွန်းပါ။ သူက ပထမဦးဆုံး အကွက်မှာ လူမမာတယောက် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး စန့်စန့်ကြီး အိပ်နေတယ်၊ လူနာရဲ့ ဘေးနားလေးမှာ လူနာရဲ့ ဇနီးလို့ ထင်ရတဲ့ အမျိုးသမီးလေးက တယောက်၊ သူက ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်ပြီးတော့ စိတ်ပူနေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ လူနာကို ကြည့်နေပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးနားမှာတော့ ဆရာဝန်တယောက် မတ်တတ်ရပ်နေပါတယ်။ အဲဒီဆရာဝန်က လူနာကို နားကြပ်ကလေး နားမှာထောက်ပြီး စမ်းသပ်နေပါတယ်၊ အဲဒါ ပထမဦးဆုံးအကွက်။ ဒုတိယအကွက်ကတော့ အဲဒီဆရာဝန်ကို ကာတွန်းဆရာက ပုံကြီးချဲ့ပြီး ဆွဲပါတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ မျက်လုံးတွေကို အဓိက ထားတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ မျက်လုံးက ဘာမှမသိတဲ့ အူကြောင်ကြောင် မျက်လုံးမျိုးပါ။ မျက်လုံးလေးက လည်နေတယ်။ ဆရာဝန်ရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာလဲ ကွက်ရှင်မတ်ပေါ့ မေးခွန်းလက္ခဏာလေးနဲ့၊ သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာ ရှုပ်နေတဲ့ သပွတ်အူလို ပုံစံလေးနဲ့။ ဘာရောဂါပါလိမ့် သူတော်တော်ဦးဏှောက်ခြောက် နေပြီလို့ ကာတွန်းကြည့်တဲ့ပရိသတ် သိအောင် ကာတွန်းဆရာက ဆွဲထားပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဒုတိယအကွက်။ နောက် တတိယအကွက်ရောက်တော့ ဆရာဝန်ကိုပဲ အသားပေးပြီး ဆွဲထားတယ်၊ ဆရာဝန်ရဲ့ မျက်ဝန်းမှာ စောစောက မြင်နေရတဲ့ အူကြောင်ကြောင် မျက်လုံးမရှိတော့ဘူး။ သူ့မျက်လုံးလေးတွေက တောက်နေတယ်။ သူ့ရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာလဲ စောစောက ကွက်ရှင်မတ်တွေ၊ သပွတ်အူတွေ မရှိတော့ပဲနဲ့ လင်းနေတဲ့ ဖန်သီးလေးတလုံးကို ခေါင်းပေါ်မှာ ဆွဲထားပါတယ်။ ဖန်သီးလေးဘေးမှာ အချောင်းချောင်းလေးတွေနဲ့ သူဘာရောဂါလဲဆိုတာ ရှာလို့ ရပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်၊ ကျမတို့ သိစေပါတယ်။ နောက် စတုတ္ထကွက်မှာရောက်တော့ ဆရာဝန်က သူတပ်ထားတဲ့ နားကျပ်ကို ချွတ်ပြီး လူနာရှင် အမျိုးသမီးဘက်ကို လှည့်ပြီးတော့ စိတ်မကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ကျနော် ၀မ်းနည်းပါတယ်၊ လူမမာဟာ အသက်မရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ (ရီသံများ) အဲ့ဒီလို ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက စတုတ္ထအကွက်ပေါ့။ နောက် ပဉ္စမအကွက်ကို ရောက်တော့ စောစောတုန်းက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ သူ့ယောက်ျားကို ကြည့်နေတဲ့ လူမမာရှင်အမျိုးသမီးက သူ့ယောက်ျားဘက်ကို လက်ညှိုး ငေါက်ငေါက်ထိုးပြီးတော့ 'ရှင် ဆရာဝန်ထက် ပိုပြီးတော့ မသိချင်နဲ့' အဲ့ဒီလို ပြောလိုက်ပါတယ်။ (ရီသံများ၊ လက်ခုပ်သံများ)
အဲ့ဒီတော့ ကာတွန်းထဲက ဆရာဝန်လို ကျမဟာ၊ ကာတွန်းထဲက လူနာရှင်မိန်းမလို အများကြီး ကြုံတွေ့တဲ့အခါ ကျမရဲ့ဆေးခန်းဟာ လူနာတော်တော်များပါတယ်။ ရေနံချောင်းမြို့မှာ ဒေါက်တာ တင်တင်ဝင်း ဆိုတာ နံမည် တော်တော်ကြီးပါတယ်။ စောစောက ဒေါက်တာ တင်မောင်သန်းပြောသွားတဲ့ ပူဖောင်းလေးတွေလဲ ပါတာပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ ဒါဟာ ကျမရဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀ သရုပ်ပေါ်အောင် ကာတွန်းလေးနဲ့ ဥပမာ ပေးတာပါ။ ကျမရဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀ကို ကျမ ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတခု ကျမပြောပြရင် ပိုပြီးတော့ သဘောပေါက် သွားမယ်လို့ ကျမ ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျမလို ခပ်ညံ့ညံ့ဆရာဝန်တွေသာကြုံရမယ့် အချက်ပါ။ တော်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ဒါမျိုး လုံးဝ ကြုံရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာ သေချာပါတယ်။ ကျမဟာ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးတော့ ၃ လ လောက်အချိန်မှာ ကြုံရတဲ့ အဖြစ်ကလေးပါ။ ၃ လ ဆိုတော့ ဘာအတွေ့အကြုံမှ မရှိသေးပါဘူး။ စမ်းတ၀ါးဝါး ဆေးကုနေဆဲ၊ ကျောင်းစာနဲ့ ပြင်ပလောကနဲ့ကို ထင်ဟပ်ကြည့်နေဆဲ အချိန်ပါ။ အဲ့ဒီအချိန် တညနေ ကျမ ဆေးခန်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ ကျမရဲ့ ဆေးခန်းထဲ လူနာနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ တယောက်က ကျမ ကုလက်စ၊ တယောက်က သူ့အလှည့်ရောက်ဖို့ ထိုင်စောင့်နေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အပြင်ဘက်ကနေ အမျိုးသမီးတယောက် ခပ်သုတ်သုတ် ဆေးခန်းထဲ ၀င်လာပါတယ်။ ဆရာမ ဆရာမ လူနာအရေးကြီးနေလို့ အိမ်ပင့်ချင်လို့ပါတဲ့။ အဲဒီလို ပြောပါတယ်။ ကျမက လူနာတယောက်ကို ဆေးကုလက်စဆိုတော့ ခဏစောင့်ပါဦး၊ ဒီက လူနာပြီးရင် လိုက်ခဲ့ပါ့မယ်ပြောတော့၊ ဟာ ဘယ်စောင်လို့ ဖြစ်မလဲဆရာမတဲ့၊ ဟိုမှာက အရေးကြီးတယ်တဲ့။ လူမမာက သတိ လစ်နေတာပါတဲ့။ သတိလစ်တယ်ဆိုတော့ အရေးကြီးပြီပေါ့၊ ကျမက ကုလက်စလူနာကို ဆေးတွေ ဘာတွေ ပေးပြီးတော့ စောင့်နေတဲ့ လူနာကို စောင့်များစောင့်နိုင်မလားလို့ ကျမအရေးကြီးတဲ့ လူနာနောက်ကို လိုက်ချင်လို့ပါလို့ ခွင့်တောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒီ လူနာကလဲ သဘောကောင်းပါတယ်၊ လိုက်သွားပါဆရာမ ကျမ စောင့်ပါမယ်တဲ့။
အဲ့ဒါနဲ့ ကျမ ဆေးအိတ်ကို ပေးပြီးတော့ လူနာရှင် အမျိုးသမီးနောက် လိုက်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျမတို့ နွေရာသီပါ။ နွေရာသီမှာ ရေနံချောင်းမြို့မှာ တော်တော် ပူပါတယ်၊ ဘယ်လောက်ထိ ပူသလဲဆိုရင် နေ့လည် ၁၂ နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီကြားမှာ ရေလုံးဝ မချိုးရဘူးလို့ အာဏာပိုင်တွေက တားမြစ်ထားတဲ့အထိ ကျမတို့ ရေနံချောင်းက ပူပါတယ်။ ရေချိုးပြီးတော့ ဗြုန်းကနဲ လဲကျပြီး သေဆုံးသူတွေ အများကြီးပါပဲ။ အဲ့ဒါကြောင့် အာဏာနဲ့ တားမြစ်ထားတဲ့ အချိန်ပါ။ စေတနာနဲ့ အာဏာသုံးတာပါ။ တခါတခါ အာဏာဟာ စေတနာနဲ့လဲ သုံးတတ်ပါတယ်။ (ရီသံများ၊ လက်ခုပ်သံများ)
အဲ့ဒီတော့ ကျမက လူနာအိမ်ကို လိုက်သွားပါတယ်။ လမ်းမှာလဲ ကျမ စဉ်းစားနေတာပေါ့။ ရေချိုးရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အချိန်ပဲ။ မေးကြည့်တယ် ဘာဖြစ်တာလဲပြော ဆိုတော့၊ ကျမ အမကြီးပါတဲ့၊ ဈေးကနေ မကြာသေးခင်က ပြန်လာပါတယ်တဲ့။ ပူပူအိုက်အိုက်နဲ့ ဈေးက ပြန်ပြန်ချင်း ရေတန်းချိုးလိုက်ပါတယ်။ ရေချိုးပြီး ကတည်းက သတိလစ်သွားတာ အခုချိန်ထိ သတိပြန်လည် မလာပါဘူးတဲ့။ အဲ့ဒီတော့ ဒါဟာ ရေချိုးမှားလို့ အပူရှပ်တယ်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် သာမိုမီတာ တိုင်းရမယ်။ စိတ်ထဲမှာ စွဲသွားတယ်။ လူနာအိမ်ရောက်တော့ လူနာက အမျိုးသမီးပါ။ ခပ်၀၀၊ ထွားထွား၊ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကို ကျမက ဘေးကနေ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ပုံစံက မလှုပ်မရှက် ပုံစံပါ။ အဲ့ဒါနဲ့ ကျမ သာမိုမီတာလေးကို ယူပြီးတော့ သူ့ပါးစပ်ကို တိုင်းဖို့ သူ့ပါးစပ်ကို ဖွင့်ပါတယ်။ သူ့ပါးစပ်က ဖွင့်လို့ မရဘူး။ သွားစိနေတယ်။ ကျမကလဲ ဘယ်ရမလဲ သွားစိနေတော့ သူ့ချိုင်းထဲ တိုင်းလိုက်တာပေါ့။ သာမိုမီတာနဲ့ ချိုင်းထဲတိုင်းတော့ အဖျား ရှိ မရှိပေါ့။ ကျမထင်သလောက် မဖျားဘူး။ ဒါနဲ့ ကျမက သွေးပေါင်ချိန် တွေ ဘာတွေ တိုင်းကြည့်သေးတယ်။ သွေးဖိအားက သိတ်ပြီတော့ များဘူး။ နောက်အဆုတ်ကို နားထောင်ကြည့် တော့ အဆုပ်မှာ အသက်ရှူသံ လုံးဝ မကြားရပါဘူး။ အဲ့ဒါလဲ ကျမက အားမလျှော့သေးဘူး။ နှလုံးကို ထောက်စမ်းကြည့် ပါတယ်။ နှလုံးကလဲ တချက်မှ မခုန်ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ နားကြပ်လေးကိုချ လူမမာရှင်ဘက် လှည့်ပြီးတော့ ၀မ်းနည်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ ပြောတော့မလို့ မပြောရသေးဘူး၊ ပြောမလို့ ရှိသေးတယ်။ ကျမရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ အတွေးတချက် ၀င်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ ကျမတို့ရဲ့ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေက ကျမတို့ကို သင်ထားတာ ရှိပါတယ်။ လူမမာတယောက်ကို စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါ သူသေပြီလို့ မပြောမီ နောက်ဆုံး စမ်းသပ်နည်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်ရမယ်။ အဲဒီ နောက်ဆုံးနည်းတွေနဲ့ စမ်းသပ်ပြီးမှ လူနာသေပြီလို့ ခိုင်လုံမှသာ လူနာရှင်ကို အတည်ပြုပေးရမယ်လို့ ပြောတော့၊ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် လူနာတယောက် အသက်မရှူရုံ၊ နှလုံးမခုန်ရုံနဲ့၊ သေပြီလို့ ပြောလို့ မဖြစ်သေးဘူး။ နောက်ဆုံး စမ်းသပ်နည်းနဲ့ စမ်းသပ်ရဦးမယ်၊ အဲ့ဒီနည်းကို ရှာပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ နောက်ဆုံးစမ်းသပ်နည်းဟာ ဘာလဲလို့ ကျမ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ကျမစဉ်းစားတယ်။ ငါ့ကို ဆရာကြီးတွေက သင်ပေးလိုက်တယ်၊ ဘာလဲ မသိဘူး၊ နောက်ဆုံးနည်း ရှိတယ်တဲ့။ စဉ်းစားတာ တော်တော်ကြာတယ်။ ဘေးကလူတွေကလဲ ကျမကို ငေးကြည့်လို့၊ ကျမလဲ စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း အဖြေမပေါ်တော့ လူနာဆေးထိုးဖို့ လာချတဲ့ ရေနွေးဇလုံထဲကို ကျမ အပ်တွေထည့်၊ ပိုက်တွေထည့် ပိုက်ကလေးကို ရေနွေးစုပ်လိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်၊ စုပ်လိုက် ပြန်ထုတ်လိုက်နဲ့ ခေါင်းထဲကတော့ သပွတ်အူတွေ တော်တော်များနေပြီ။ ငါဘာလုပ်မလဲလို့။ ကံကောင်းချင်တော့ ကျမ သတိရသွားပါတယ်။ ဇဝေဇ၀ါ မျက်လုံးတွေ အကုန်ဖျောက်ပြီး မျက်နှာထား ခပ်တည်တည်နဲ့ အဲ့ဒီအမျိုးသမီး ဆီကနေ ကျမကို လက်နှိပ်ဓါတ်မီးတခုပေးပါလို့ တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ကဗျာကယာပဲ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးထိုးပေးတယ်။ သူ့ဆီက လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကို ယူပြီးတော့ လူမမာရဲ့ မျက်လုံးကို ဖွင့်ပြီးတော့ ကျမ မီးထိုးကြည့်ပါတယ်။ သာမန်လူတွေဟာ မျက်လုံးကို မီးရောင်နဲ့ လျှပ်တပြက် ထိုးလိုက်လို့ ရှိရင် အဲ့ဒီ မျက်လုံးသူငယ်အိမ်က မီးရောင်ကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သူငယ်အိမ် ကျယ်ရာကနေ ကျဉ်းသွားရပါတယ်။ ကျုံ့ဝင်သွားရပါတယ်။ အခု ကျမရဲ့ လူနာက လက်နှီပ်ဓါတ်မီးနဲ့ ထိုးလိုက်ပေမယ့် မျက်လုံးသူငယ်အိမ် ကျယ်မြဲကျယ်လျက်ပါ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီတဖက် မသေချာသေးဘူး၊ နောက်တဖက် ထပ်ထိုးကြည့်ပါတယ်။ ထပ်ထိုးကြည့်တော့ နောက်တဖက်ကလဲ ကျယ်မြဲ ကျယ်လျက် နည်းနည်းမှကို မလှုပ်ပါဘူး။ သေချာပြီ ဆိုတော့မှ ကျမက လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကို ချ၊ စိတ်မကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ လူမမာနားတော့ မနေရဲဘူး၊ ၀ုန်းဆို ထထိုင်ပြီး ဖက်လိုက်မှာစိုးလို့၊ လူနာရှင်ဘက်ကို ကပ်သွားပြီးတော့ ကျမ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အမကြီးလို့ ပြောရမှာတော့ ကျမ ၀မ်းနည်းပါတယ်၊ အမကြီးရဲ့ လူမမာက အသက်မရှိတော့ ပါဘူးလို့၊ ကျမ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လူနာရှင် မိန်းမက ကျမ ထင်သားပဲ ဆရာမတဲ့။ အဲ့ဒီလို ပြောပါတယ်။ ကျမ တော်တော် ရှက်သွားတယ်။ ငါ့မှာတော့ ဒီလူနာ သေ မသေ စဉ်းစားလိုက်ရတာ၊ သူကတော့ ကြိုပြီးတော့ သိနေခဲ့ပါလား။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျမဟာ ထိုင်ရာကနေ ထပြီးတော့ ထွက်ပြေးသွားချင်လောက်အောင် ရှက်ပါတယ်။ ရှက်တာနဲ့အမျှ ဒေါသလဲထွက်။ ငါ့ကို ဒီလူနာ သေမှန်း သိလျက်နဲ့ သေနေတယ်လို့ ထင်နေလျက်သားနဲ့၊ ငါ့ဆေးခန်းကို ပိတ်ပြီး လာခဲ့ရအောင် ငါ့ကို ခေါ်တယ်။ ကျမဟာ ဒေါသနဲ့ ဟောက်ထည့်လိုက်တယ်။ လူနာသေတယ်လို့ ထင်လျက်သားနဲ့ ကျမကို ဘာဖြစ်လို့ လာခေါ်တာလဲ၊ ကျမမှာဖြင့် ဆေးခန်းလူနာတွေ ပစ်ထားခဲ့ရတာ၊ ရှင်အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ ဘာလို့ လာပင့်တာလဲ ဟောက်လိုက်တော့၊ လူနာရှင်အမျိုးသမီးက မျက်နှာလေး ချပြီး ပြောပါတယ်။ ဆရာမရယ် သေတယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆရာမဆီက အတည်ပြုချက်လေး ယူချင်လို့ပါတဲ့။ (ရီသံများ) အဲ့ဒါ ကျမဘ၀ရဲ့ အင်မတန် ထူးခြားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတခုပါ။ ဒီတော့ ကျမဟာ ဆရာဝန်ဘ၀မှာလဲ ညံ့ဖျင်းတဲ့ ဆရာဝန်ပါ။
ဘယ်လောက် ညံ့ဖျင်းသလဲဆိုရင် ကျမ လူမမာတွေ အိမ်တွေ လိုက်သွားတယ်၊ ခလေးမွေးပေးရတယ်၊ ညှပ်နဲ့ ဆွဲမွေးပေးရတယ် ဆိုရင်ပဲ ကျမဟာ သားဖွါးမီးယပ်ပညာရှင်တွေလို ခံစားရပါတယ်။ ဘ၀င်မြင့်ခဲ့ပါတယ်။ အလုံး အကြိတ်လေးတွေ၊ အဆီလုံးလေးတွေ ခွဲစိတ်ရတာကိုပဲ ကျမဟာ ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်ကြီးလို ကျမ ဘ၀င်မြင့်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ ပြင်ဘက်မှာ ဆေးပညာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘာတွေ တွေးထင်နေသလဲ၊ ဘာတွေ စီစဉ်နေကြသလဲ ကျမ မသိပါဘူး။
ဒိထက်ပိုညံ့တာတခုက ကျမတို့ ဆရာဝန် ဖြစ်တော့နောက်မှာ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူ့ ဆေးရုံတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြည်သူ့ဆေးရုံ တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့က ဘွဲ့ရရုံနဲ့ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ချင်တဲ့စိတ်ရှိရင် တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေးရအောင် စာမေးပွဲတွေ ဖြေရပါတယ်။ အဲ့ဒီက စာမေးပွဲတွေကတော့ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့က ကျင်းပပေးတဲ့ စာမေးပွဲတွေပါ။ အဲ့ဒီ စာမေးပွဲတွေက ဖြေပြီးအောင်မှသာ ကျမတို့ဟာ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ကျမဟာ ဘွဲ့ရရခြင်း တိုင်းပြည်ကို အင်မတန် အကျိုးပြုချင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တာဝန်ကိုလဲ အင်မတန် ထမ်းဆောင်ချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ကျမ စာမေးပွဲတွေ ဖြေပါတယ်။ ဖြေတိုင်း ဖြေတိုင်း ကျပါတယ်။ နောက်ဆုံးတကြိမ်မှာတော့ ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်သွားတယ်။ အောင်သွားတော့ ကျမတို့ ကျက်ရတဲ့ စာတွေကလဲ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ပါပါတယ်။ မြန်မာစာ ပါပါတယ်။ ဗဟုသုတ ပါပါတယ်။ ဆေးပညာတော့ မပါပါဘူး။ (ရီသံများ) အဲ့ဒီတော့ ကျမတို့ ရေးဖြေအောင်သွားတဲ့အခါ ကျမ ရန်ကုန်ကို လာပြီး နှုတ်ဖြေ ဖြေရပါတယ်။ နှုတ်ဖြေဖြေတော့ ကျမတို့ သူငယ်ချင်း သုံးလေးယောက် စုပြီး တအိမ်မှာ တည်းတယ်။ တည်းပြီးတော့ နောက်ဆုံးပေါ် ဂျာနယ်တွေ၊ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ကျမတို့ အကုန်ဖတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက (အိတ်စ်) ရောဂါ ကမ္ဘာမှာ လူသိခါစ၊ ရော့ဟဒ်ဆန်ကြောင့် အဲ့ဒီရောဂါကို လူတော်တော်များများက သိကုန်ကြပါပြီ။ ကျမတို့ ကျောင်းတုန်းက ဒီရောဂါဟာ မထင်ရှားသေးတဲ့အတွက် ကျမတို့ သိပ်စာမကျက်ရပါဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အိတ်စ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းတွေ၊ ဖြစ်ပွါးတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ၊ ဆက်သွယ်မှုတွေ အားလုံးကို ကျမတို့ တညလုံး ဖတ်ရတယ်။ ဖတ်ပြီးတော့ နောက်တနေ့ ကျမတို့ အဆင်သင့်ပဲပေါ့။ ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာမေးမေး အားလုံးရပြီလို့ ဆိုပြီး ရင်ကော့ပြီး စာမေးပွဲခန်းထဲ ၀င်သွားပါတယ်။ ၀င်သွားတော့ ကျမတို့ကို မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေက ကျမထင်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေ ဘာတခုမှ မမေးပါဘူး။ ကျမ မထင်မှတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေပဲ မေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ မေးခွန်းတွေဟာလဲ ကျမတခါမှ မကြားဘူးတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ။ ဘာမေးခွန်းတွေလဲ ဆိုတာတော့ ကျမ မပြောတော့ပါဘူး။ မမှတ်မိလို့ပါ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို မေးပြီးတော့ ကျမကလဲ မဖြေနိုင်ပါဘူး။ ကျမကို ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့တာ မေးပါ။ ကျမ အကုန်ရပါတယ် ပြောတော့ အဲ့ဒါတွေ မမေးဘူးတဲ့၊ ငါတို့ မေးတဲ့ မေးခွန်းကိုပဲ ဖြေရမယ်တဲ့။ ကျမ စာမေးပွဲ ကျခဲ့ပါတယ်။ ကျမ အင်မတန် ထမ်းဆောင်ချင်တဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို မထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါ။ အဲ့ဒါ ကျမတို့ ဘွဲ့ရခါစ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀) နှစ်ကပေါ့။ အခုအချိန်မှာတော့ အခြေအနေ တမျိုးပြောင်းသွားပါပြီ။
တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လျက် ရှိပါတယ်။ မြို့နယ်ဆေးရုံတွေ၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာ ဆရာဝန်တွေ လိုနေပါတယ်တဲ့။ အရင်တုန်းက တနှစ်တနှစ် အောင်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ငါးရာ ခုနှစ်ရာလောက် ရှိပါတယ်။ ခေါ်တဲ့ဆရာဝန်က ၁၅၀ လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အခုတော့ တနှစ်တနှစ် ဘယ်လောက်အောင်သလဲတော့ မသိဘူး။ ခေါ်တဲ့သူတွေက အများကြီးပဲ။ ဖြေတဲ့သူတိုင်းကို အအောင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြေတဲ့သူ တဖြေးဖြေး နည်းသွားပါတယ်။ ကျမကိုယ်တိုင် အရင်တုန်းက တိုင်းပြည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ချင်တဲ့ ကျမဟာ အခုအခြေအနေမှာ သွားပြီးတော့ ဖြေရင် အောင်မယ်ဆိုတာ ကျမ သိပါတယ်။ အခုတော့ ကျမ တိုင်းပြည်တာဝန် ထမ်းဆောင်ချင်တဲ့စိတ် မရှိတာလား၊ အသက်ကပဲ ကြီးသွားတာလား မသိပါဘူး။ စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။ အခုတော့ ကျမဟာ ခပ်ညံ့ညံ့ ပြင်ပဆေးကု ဆရာဝန်ဘ၀နဲ့ပဲ ဆက်ပြီးတော့ နေထိုင်လျက် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါက ကျမရဲ့ ဆရာဝန်ဘ၀ ညံ့ဖျင်းမှုတွေပါ။
ဆရာဝန်ဘ၀ ပြောပြီးတော့ စာရေးဆရာဘ၀ ညံ့ဖျင်းမှုတွေကို ၀န်ခံလိုပါတယ်။ ကျမ စာရေးဆရာအဖြစ် ဘာတွေညံ့သလဲ ဆိုတာကတော့ ကျမရဲ့ ၀တ္ထုဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ထူးပြီးတော့ ၀န်ခံစရာ မလိုလောက်အောင် သဘောပေါက်ပြီးသားလို့ ကျမ ယူဆပါတယ်။ ဒီတော့ ကျမစာရေးတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျမရဲ့ အရေးအသားတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတည်ဆောက်ပုံတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ ညံ့ဖျင်းတာကိုတော့ ကျမ မပြောတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ညံ့ဖျင်းတာကိုတော့ ကျမ ပြောလိုပါတယ်။ ကျမဟာ စာရေးဆရာ ဖြစ်လို့သာ ဖြစ်လာရတယ်၊ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါဘူး။ စာရေးဆရာ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ချင်သလဲလို့ တယောက်ယောက်က မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ ကျမ အိုးနင်းခွက်နင်း အမြဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာဖြေလို့ ဖြေရမှန်း မသိပါဘူး။ အဲ့ဒါဟာ ကျမရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုပါ။ အခုအချိန်ကျမှ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်။ အရင်တုန်းက ကျမ မသိပါဘူး။ အခုအချိန်လဲ ကျမ ဘာဖြစ်လို့ ပြန်စဉ်းစားမိသလဲဆိုတော့ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ဖတ်လိုက်ရလို့ပါ။ ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ကို အားလုံးသိကြမှာပါ။ အဲ့ဒီဆရာမကြီးက စာရေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးဖူးပါတယ်။ သူက ဘာကို ဥပမာပြသလဲဆိုတော့ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသား အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော်နဲ့ ဥပမာ ပြပါတယ်။ ဒေါက်တာ ရီဇော်ဟာ သူစာရေးတဲ့ အချိန်တုန်းက သူနိုင်ငံဟာ ကိုလိုနီနိုင်ငံပါ။ သူ့တိုင်းပြည် လွတ်လပ်ရေး မရသေးပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူဟာ သူ့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ကျနော် စာ(၃)အုပ် ရေးပါမယ်တဲ့။ အဲ့ဒီစာ (၃) အုပ်ရေးပြီးတဲ့ အထိ ကျနော့်တိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ရေး မရသေးဘူးဆိုရင် ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေ ပစ်လိုက်မယ်တဲ့။ အဲ့ဒီ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျေညာပြီး စာရေးတဲ့ သူတယောက်ပါ။ တကယ်လဲ သူစာအုပ် ရေးခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်နှစ်အုပ် ရေးပြီးတဲ့အခါမှာပဲ သူ့တိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ရေး ရသွားပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ နယ်ချဲ့အစိုးရက သူပုန်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပြီးတော့ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ကွပ်မျက်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ သူရဲကောင်း ပီသစွာ ကျဆုံးသွားပါတယ်။ အဲဒီ ဒေါက်တာရီဇော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်က ရေးပြလိုက်တဲ့အခါ ကျမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ရှက်သွားပါတယ်။ ငါ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စာရေးတာလဲ။ သူများတွေများ ရည်ရွယ်ချက်က မွန်မြတ်လိုက်တာ။ မြင့်မြတ်လိုက်တာ၊ ငါ့မှာတော့ ဘာရည်ရွယ်ချက်မှ မရှိပါလား၊ ကျမရေးခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတွေ လေးငါးပုဒ်၊ လုံးချင်းစာအုပ်နဲ့ ၀တ္ထုတွေ ၃၀ ကျော်၊ ငါဘာကို ရေးတာလဲ၊ အဲ့ဒီတခါ ကျမ နည်းနည်းတော့ သဘောပေါက်လာပါတယ်။ ကျမဟာ ရည်ရွယ်ချက်တော့ ရှိခဲ့ဟန် တူပါတယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက် လဲ တွေးကြည့်တော့ ကျမ၀တ္ထုတွေထဲက ကျမ ပြန်ပြီးတော့ လေ့လာကြည့်ရသလောက်တော့ ကျမဟာ အမျိုးသမီးတယောက် ဖြစ်တာနဲ့အမျှ အမျိုးသမီးများရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားရေး၊ တိုးတက်အောင်မြင်ရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရား မြင့်မြတ်ရေး အဲ့ဒါတွေကို ကျမ ဦးတည်ခဲ့ပုံရပါတယ်။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ပြန်ပြီးတော့ ဆင်ခြင်မိသလောက် ပြောရရင် ဒါတွေကြောင့် ရေးမိခဲ့တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ဒါတောင် အခုချိန်ထိ မသေချာသေးပါဘူး။ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်တုန်းပါပဲ။ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကျမကိုယ်ကျမ မသေချာသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒါ ထင်မြင်ချက်တခုပါ။ ကျမ အဲ့ဒီလို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးခဲ့မိတယ်လို့ ကျမ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ကောက်ချက်ချရပါတယ်။
ဒါက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျမ ညံ့တာ၊ နောက်တခုက ကျမတို့ဟာ ၀တ္ထုတပုဒ် ကဗျာတပုဒ် ရေးတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့စာကို စာဖတ်ပရိသတ် ဖတ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်ဆီကို ပို့ချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးတွေ အမြဲရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျမတို့ စာတွေ ရေးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖတ်ဖို့ ရေးတာထက် သူတပါးဖတ်ဖို့ ရေးတာက ပိုပြီးတော့ များပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမဟာ ပရိသတ်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ၀တ္ထုတွေ အများကြီး ရေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိသတ်ဆီကို ရည်ရွယ်သော်လည်း ပရိသတ်ဆီကို မရောက်ပဲ မမျှော်လင့်ပဲ ရေမြောင်းထဲကို ရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ ၀တ္ထုလေးတွေ၊ ကဗျာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အယ်ဒီတာစာပွဲက ဆုတ်ဖြဲပြီးတော့ ရောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အယ်ဒီတာ စာပွဲကနေ ကျော်သွားပြီးမှ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျမရဲ့ ၀တ္ထုလေးတွေ ကဗျာလေးတွေ ရေမြောင်းထဲကို ရောက်သွားတာ ကျမ ခဏခဏ ကြုံရပါတယ်။ ဒါဟာ ကျမရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျမတို့ဟာ စာဖတ်ပရိသတ်တွေဆီကို ပို့တဲ့အခါမှာ ပရိသတ်ဆီရောက်အောင် ကျမတို့ ရေးနိုင်ရပါမယ်။ ဘယ်လို အတားအဆီးပဲရှိရှိ ဘယ်လို အဖြတ်အတောက်ပဲ ရှိရှိ ဒါကို လှည့်ပတ်ပြီး ပို့နိုင်ရပါမယ်။ အရေးကြီးတာက ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့က အဲ့ဒီလို မပို့တတ်ဘူး။ ကျမက ပိုပြီးတော့ မပို့တတ်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ကျမက ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပရိသတ်ဆီကို ရောက်အောင် ပို့ပေးလိုက်ပေမယ့် တခါတခါကျတော့ ကံအကြောင်း မသင့်လို့ ပရိသတ်ဆီကို မရောက်တော့ပဲ ရေမြောင်းထဲကို ရောက်သွားတာ ကြုံရပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ ကျမရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုပါ။ ရေမြောင်းထဲကို ရောက်သွားတဲ့ ၀တ္ထုလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကဗျာလေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက ကျမ ကဗျာတပုဒ်အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကဗျာလေးက တိုတိုလေးပါ။
ကဗျာလေးခေါင်းစဉ်က 'လေလွင့်သူရဲ့တိမ်' လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၈) နှစ်လောက်က ရေးထားတာပါ။ ကျမ အဲ့ဒီကဗျာကို ပရိသတ်ဆီပို့ဖို့ အခုအချိန်ထိ ၃ ကြိမ်တိတိ ပို့ပြီးပါပြီ။ ၃ ကြိမ်လုံးလုံး ရေမြောင်းထဲပဲ ရောက်သွားပါတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီကဗျာလေး ဘာကြောင့် ရေမြောင်းထဲကို ရောက်သလဲဆိုတာ ၀ိုင်းပြီးတော့ ဆန်းစစ်ပေးပါလို့ ကျမ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ ကျမ အဲ့ဒီကဗျာလေးကို ရွတ်ပြပါမယ်။ နဲနဲကြာပြီဆိုတော့ အလွတ်မရလို့ စာရွက်ကို ကြည့်ပြီးတော့ ရွတ်ပါမယ်။
မုန်းတီးမှုတွေ စားရတယ်ဆိုတာ တခြား စားစရာ မရှိလို့ စားရတာပါ။ ကျမမှာက နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မုန်းတီးမှုကို စားရပါတယ်။ တချို့ တချို့သော သူတွေ၊ ကံကောင်းတဲ့သူတွေကတော့ စားစရာတွေ အများကြီး ရှိမှာပေါ့။ အဟာရရှိတဲ့ အစားအစာတွေ အများကြီး စားတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ဗိုက်တွေကလဲ တဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုပိုပြီး ပူလာပါတယ်။ (ရီသံ၊ လက်ခုပ်သံများ) အဲ့ဒီတော့ ဒီပရိသတ်ထဲမှာ ဗိုက်ပူသူ ရှိရင် (ရီသံများ) တချို့ကျတော့ ဘီယာသောက်လို့ ဗိုက်ပူတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက တမျိုးပေါ့။ ကျမမှာတော့ သူများလို စားစရာ အဟာရလဲ သိတ်မရှိ၊ လူပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ၊ လူပုံကလဲ ပိန်ပိန် ပုပု သေးသေးလေး၊ ဒါ အဟာရ မရှိလောက်ဖူးဆိုတာ သိလောက်ပါတယ်နော်။ ကျမတို့မှာက ဆန်စပါး။ ၀၀လင်လင် မစားရ။ တချို့တော့ ဆန်စပါးတင်မကဘူး၊ ဘိလပ်မြေတွေ ဘာတွေလဲ စားတတ်ကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ (ရီသံများ) အဲ့ဒီတော့ ကျမက စားစရာ မရှိတော့ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကိုယ့်ရဲ့ မုန်းတီးမှုကို ကိုယ့်အမုန်းတွေကို ပြန်ပြီး စားရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခွန်အားဖြစ်အောင် နေခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ကျမဟာ ကဗျာလေးကို အဲ့ဒီလို ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။
(လက်ခုပ်သံများ) ဂုဏ်သိက္ခာလဲ မရှိဘူး၊ ကိုယ်စီးတဲ့ ဖိနပ်အောက် အမှန်တရားကို မှောက်ကျပစ်လိုက် တဲ့အခါ၊ မှောက်ချပစ်လိုက်တဲ့အခါ ဘ၀ဆိုတာ ကောလဟလ တခုထက် မပိုပါဘူး။ ဒီလိုဘ၀မျိုးကဖြင့် အားကျစရာ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုဘ၀မျိုးကို မက်မောစရာ မရှိပါဘူး။ ကျမက အဲဒီလို ရေးပါတယ်။
(လက်ခုပ်သံများ) ဒါပေမယ့် ဆိုတာက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ၊ ကိုယ့်ဆန္ဒတွေ လုပ်လို့ မရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ဒါပေမယ့်ကို ခံထားပါတယ်။
ကောင်းကင်ဆိုတာကတော့ သူ့ရဲ့အောက်မှာ ဖြစ်နေသမျှ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အိနြေ္ဒတခွဲသားနဲ့ပဲ ငုံ့ကြည့်နေတတ်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာလဲ ဘာတွေကိုမှ၊ တိမ်တွေရဲ့ ကိစ္စ၊ ရာသီရဲ့ ကိစ္စရော လောကကို တောင်းဆိုလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ တောင်းဆိုလို့ မရတဲ့အပိုင်းတွေ အများကြီး ရှိတော့ ကျမလဲ ဒီ အိနြေ္ဒကြီးတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးလို နေလိုက်ပေါ့လို့ ကျမက အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ)
အဲ့ဒါ ကျမ ပရိသတ်ဆီ ရောက်အောင်ပို့ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးသော်လဲ ပရိသတ်ဆီ သုံးကြိမ်တိုင် မရောက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဒါ ဥပမာပါ။ နောက်ထပ် ဥပမာတွေကိုတော့ ကျမ ရွတ်မပြတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒါဟာ ကျမရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေပါ။ ကျမ ညံ့ဖျင်းမှုတွေ အားလုံးကို ရှေ့ဆက်ပြောရရင် အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြောတော့ပါဘူး။ ဒီလောက်ဆိုရင် ပရိသတ် သဘောပေါက်ပါပြီ။ ဒီတော့ ကျမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညံ့နေတာကို သိသွားပြီ။ ညံ့နေတာကနေ တော်အောင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ ညံ့နေတာကနေ တော်အောင် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ကျမ တော်တာ မတော်တာ အမြဲတမ်း စဉ်းစားပါတယ်။ ညံတာကလဲ ကျမတယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမသူငယ်ချင်းဆရာဝန်တွေ သူတို့လဲ ညံ့ကြပါတယ်။ သူတို့ကို မေးကြည့်တဲ့အခါ သူတို့ကလဲ တော်ချင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျမတို့ အားလုံးစုပြီး တော်အောင်လုပ်ကြဖို့ တမျိုးမျိုး ရှာမှဖြစ်မယ်။ ညံ့တာသိရင် သူတော်မှာပဲ၊ အဲ့တော့ ညံ့တဲ့အကြောင်းတွေကို ရှာရအောင်၊ ငါတို့ ဘာကြောင့် ညံ့သလဲ အဲ့လို ကျမတို့ မေးပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျမတို့က လူငယ်တွေဆိုတော့ အမြဲတမ်းပဲ လူကြီးတွေကို ပုံချဖို့ စိတ်ထက်သန်တဲ့ လူတွေပါ။ ကျမတို့က လူကြီးတွေကို ပုံချတယ်။ ကျမတို့ ဘာကြောင့် ညံ့သလဲ၊ ကျမတို့ တော်အောင် လေ့ကျင့်မပေးနိုင်တဲ့ လူကြီးတွေ ညံ့လို့ ကျမတို့ တွေးပါတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ)
အဲ့ဒါ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မှန်တဲ့ ကောက်ချက်တခုတော့ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့။ ကျမဟာ လူငယ်ရဲ့ ကိုယ်စား ကျမ သွားပြီးတော့ ကောက်ချက်ချလိုက်တာပါ။ တကယ်တမ်းကတော့ ကျမတို့ဟာ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် တော်အောင် မကြိုးစားနိုင်ရင်၊ ၈၀% တော်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ၈၀% မရရင် ၆၀%၊ ၆၀% မရရင် ၄၀% ရဖို့ ကျမတို့မှာ တာဝန် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမတို့က ၄၀% ရတာကို ၁၀၀% မရလို့ ဆိုပြီး ညည်းညူပြီးတော့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် နေခဲ့ကြလို့ အဲ့ဒီထက် ညံ့လာပါတယ်။ အဲ့တော့ အဲ့ဒါတွေကို သိသွားရင် ကျမတို့ တော်ကြမယ်။ တော်အောင်လုပ်ကြမယ် ဆိုပြီးတော့ ကျမတို့ဟာ တော်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကလေး ကိုယ်စီနဲ့ အသက်ရှင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ အဲ့ဒီနေရာမှာ ကျမတို့က မျှော်လင့်ချက်သာ ထားတယ်။ မျှော်လင့်ချက်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် အတိအကျကို ကျမတို့ အသေအချာ မသိပါဘူး။ အဲ့တော့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျမ ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာလေးကို ပြောရင်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပေးပါမယ်။
ကျမဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်တအုပ် ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် စိတ်ပညာရှင် ဆရာကြီး အဲလစ်စတုန်းဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဂျမန်စိတ်ပညာရှင်ကြီးပါ။ အဲဒီ အဲလစ်စတုန်းက စာအုပ်တွေ အများကြီး ရေးပါတယ်။ သူရေးတဲ့ စာအုပ်တွေ အနက်က မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ပါ။ ခေါင်းစဉ်က 'Revolution of Hope' မျှော်လင့်ချက်၏တော်လှန်ရေး။ အဲ့လို ဘာသာပြန်လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ စာအုပ်ကို ကျမ သိတ်မကြာခင်က ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကပါ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်တော့ စာအုပ်ထဲမှာက မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုတာက အင်မတန် သဘောကျဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သူက မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ ဆန္ဒသက်သက်ကိုသာ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျမတို့ကတော့ မွေးကတည်းက ခုချိန်ထိ ထင်လာခဲ့တယ်။ ကျမတို့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေဟာ ကျမတို့ မျှော်လင့်ချက်ပဲလို့ ကျမထင်ခဲ့တယ်။ ကျမဟာ သိန်း ၅၀ ကျော်လောက် ချမ်းသာတဲ့ သူဌေးမကြီး ဖြစ်ချင်တယ်။ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင် ရမယ်ထင်တယ်။ ကျမဟာ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေပွတ်တွေ အများကြီးပိုင်တဲ့ ဘ၀ ရောက်ချင်တယ်။
ဥပမာ ပြောတာပါ။ အဲ့ဒီလို ဘ၀မျိုးရောက်ချင်တယ်။ အဲ့ဒါဟာ ကျမရဲ့ ဆန္ဒ၊ ဒီဆန္ဒဟာ ကျမရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပဲလို့ ကျမ အဓိပ္ပါယ် ပေါက်ခဲ့တယ်။ ဆရာကြီး အဲလစ်စတုန်းက ဘာပြောသလဲ၊ မျှော်လင့်ချက် ဆိုတာ ဆန္ဒသက်သက်ကို ခေါ်တာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ မျှော်လင့်ချက်အတွက် ဆန္ဒမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် တွဲပြီးပါရမယ်တဲ့။ ဆုံးဖြတ်ချက်မပါတဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မပါတဲ့ ဆန္ဒဟာ မျှော်လင့်ချက်အရ မျှော်လင့်ချက် အသေကြီး ပဲတဲ့။ သူက Passive Hope လို့ ကျမတို့ကို ရှင်းပြပါတယ်။ Passive ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင် ဖန်တီးတာ မဟုတ်ပဲနဲ့ သူတပါးပြုပြင်ဖန်တီးတာကို စောင့်ပြီးနေတဲ့ သဘောတရားကို Passive လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သူက ဆုံးဖြတ်ချက်မပါတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ဟာ မျှော်လင့်ချက် ဖြစ်ရင်တောင်မှ မျှော်လင့်ချက် အသေကြီးပဲတဲ့။ အဲဒီတော့ မျှော်လင့်ချက်အသေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်အရှင် သူက ခွဲခြားပြတယ်။ အဲ့လို ခွဲခြားပြဖို့အတွက်လဲ သူက ကျမတို့ကို အင်မတန်ကောင်းတဲ့ ပုံဝတ္ထုကလေးတပုဒ်ကို ပြောပြပါတယ်။
အဲ့ဒီ ပုံဝတ္ထုလေးက သုံးလေးကြောင်းပဲ ရှိတဲ့ ပုံပြင်တိုကလေးပါ။ အဲ့ဒီ ပုံဝတ္ထုကလေးကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က 'တရားဥပဒေရှေ့မှောက်မှာ' တဲ့၊ အဲ့ဒီ ပုံဝတ္ထုထဲမှာ ဇာတ်လိုက် နှစ်ယောက်ပဲ ပါပါတယ်။ တယောက်က ခရီးသည်ကြီးတယောက်၊ အဲ့ဒီ ခရီးသည်ကြီးက သူ့လမ်းခရီးကနေပြီးတော့ တံခါးတခုရဲ့ ရှေ့ကို ရောက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီတံခါးကြီးက ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးကြီးပါ။ ပိတ်နေတဲ့ တံခါးကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ဖွင့်ထားတဲ့တံခါးဆိုတော့ ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးကြီးရဲ့ ဟိုဘက်မှာ သူဟာ အများကြီး သူမြင်ချင်တာတွေ အကုန်မြင်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဖက်မှာ အင်မတန် သာယာအေးချမ်းတဲ့ မြို့တော်ကြီးတခု ရှိပါတယ်။ သည်တံခါးကြီးက အဲ့ဒီမြို့တော်ကို ၀င်တဲ့ တံခါးကြီးပါ။ အဲ့ဒီတံခါးကြီးကနေ လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ဟိုး မြို့တော်ထဲမှာ လူတွေ ပျော်ရွှင်နေကြတာ၊ သွားချင်တဲ့ နေရာတွေ သွားနေကြတာ၊ စကားတွေ ပြောနေကြတာ၊ ရေးချင်တာတွေ ရေးနေကြတာ၊ နားထောင်ချင်တာတွေ သူတို့ ကြားအောင် နားထောင်နေနိုင် ကြတာ၊ အဲဒါတွေ အားလုံးကို သူမြင်နေရတော့ အဲ့ဒီကို သိပ်သွားချင်တယ်။ အင်မတန် ပျော်ရွှင်တဲ့ နိုင်ငံကြီး တခုပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ငါသွားချင်တယ်။ ခက်နေတာက တံခါးကြီးရဲ့ ရှေ့မှာ အစောင့်ကြီးတယောက် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အစောင့်ကြီးက မတ်မတ်ရပ်ပြီးတော့ ခရီးသည်ကြီးဆီကို ကြည့်နေတယ်။ ခရီးသည်ကြီးက အစောင့်ကြီးဆီကို သွားပါတယ်။ "အစောင့်ကြီးခင်ဗျာ" တဲ့၊ "ကျနော် ဒီတံခါးကနေ ဖြတ်ပြီးတော့ ဟိုး မြို့တော်ကြီးဆီကို သွားချင် ပါတယ်။ ကျနော့်ကို ၀င်ခွင့်ပေးပါခင်ဗျာ" တဲ့။ အဲ့ဒီလို သူက ယဉ်ကျေးစွာ ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ အစောင့်ကြီးက ၀င်ခွင့်မပေးပါဘူးလို့ မျက်နှာထားတည်တည်နဲ့ ငြင်းလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ခရီးသည်ကြီးက ၀င်ခွင့်မပေးသေးဘူး ဆိုတော့ တချိန်မှာတော့ ငါ့ကို ၀င်ခွင့်ပေးမှာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီး သူဟာ နောက်ပြန်ဆုတ်သွား တယ်။ ပြန်ပြီးတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ထိုင်ပြီးတော့ စောင့်နေပါတယ်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ၀င်ခွင့်ပေးတဲ့အထိ စောင့်တယ်။ သူတခါ မတ်တတ်ရပ်ပြီးတော့ အစောင့်ကြီးဆီကို ပြန်သွားပါတယ်။ "အစောင့်ကြီးခင်ဗျာ ကျနော် ဟို မြို့တော်ကြီးထဲကို ၀င်ချင်ပါပြီ၊ ကျနော့်ကို ဒီတံခါးကနေ ၀င်ခွင့်ပေးပါ" တဲ့။ အဲ့တော့ မနှစ်ကလိုပဲ အစောင့်ကြီးက မျက်နှာမာမာနဲ့ ၀င်ခွင့်မပေးဘူးလို့ ငြင်းလိုက်တယ်။ သူက မနှစ်ကလိုပဲ နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာပဲ ထိုင်စောင့်နေတယ်။ ငါ့ကို တချိန်ချိန်တော့ ၀င်ခွင့်ပေးမှာ ထင်ပါရဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် တယောက်ယောက်ကပဲ ငါ့ကို ၀င်ထွက်ခွင့် လက်မှတ် တောင်ပေးမှာ ထင်ပါရဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် တယောက်ယောက်ရဲ့ နောက်ကနေ ကပ်ပြီးလိုက်ရင် တော့ ငါ ဒီအထဲကို ၀င်ရလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့။ သူဟာ တွေးပြီးတော့ သူ့နေရာမှာ ငြိမ်ပြီးတော့ ထိုင်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီလို တစုံတယောက်က ပေးလာနိုးနဲ့ မျှော်လင့်ခဲ့တာ ရက်ကနေ လ၊ လကနေ နှစ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့အထိ သူက အဲ့ဒီနေရာမှာ ထိုင်ပြီး စောင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး သူဟာ အဖိုးကြီးဘ၀နဲ့ တုန်တုန်ချိချိနဲ့ ထပြီးတော့ အစောင့်ကြီးဆီကို ထသွားပါတယ်။ သူသွားတဲ့အချိန်မှာ သူစဉ်းစားတယ်၊ ဒီတံခါးကြီးဟာ ဖွင့်ထား တာလဲ ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်သူမှလဲ ၀င်ခွင့် လာမတောင်းကြဘူး၊ ငါတယောက်ပဲ ၀င်ခွင့်တောင်းတယ်၊ ဖြတ်ဆင်း သွားတဲ့ လူလဲ မမြင်ရဘူး၊ အဲ့ဒါ ထူးတော့ ထူးဆန်းတယ်၊ ငါ ဒီတခါ စမ်းကြည့်ဦးမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး
"အစောင့်ကြီးခင်ဗျာ၊ ကျနော် ဒီအရှေ့မှာ စောင့်လာခဲ့တာ ကျနော် ဒီအရှေ့မှာ စောင့်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပါပြီ ကျနော် အိုလဲ အိုနေပါပြီ၊ သေလဲ သေရပါတော့မယ် အခုအချိန်ထိ ကျနော် ၀င်ခွင့်မရသေးဘူး၊ ကျနော်ဒီရှေ့မှာ စောင့်နေသမျှ နှစ်တွေမှာလဲ ဒီတံခါးကြီးထဲကို ၀င်တဲ့သူရယ်လို့ တယောက်မှ မတွေ့သေးပါဘူး၊ ကျနော်တယောက်တည်းပဲ ဒီရှေ့မှာ ရှိတယ်၊ အဲဒါဟာ ဘာသဘောလဲ ခင်ဗျာ" တဲ့။ သူက အဲ့ဒီလို မေးလိုက်တော့ အစောင့်ကြီးက "ဟုတ်တယ် ခင်ဗျားက လွဲပြီးတော့ တယောက်မှ အထဲကို ၀င်ခွင့်မတောင်းသေးဘူး၊ ၀င်လို့လဲ မရသေးဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီတံခါးဟာ ခင်ဗျားအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးဖြစ်လို့ပဲ၊ ဘယ်သူမှလဲ လာမမေးပါဘူး၊ အခုတော့ ကျနော် ဒီတံခါးကို ပိတ်ရပါတော့မယ်" တဲ့ ပြောပြီးတော့ သူ့ရှေ့မှာပဲ တံခါးကြီးကို ပိတ်လိုက်တယ်၊ ဒီတော့ ကပ်ဖကာရဲ့ အဲ့ဒီ ပုံဝတ္ထုလေးကို အဲလစ်စတုန်းက ကျမတို့ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်၊ ဒီလူဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီထဲကို ၀င်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တာ အဲ့ဒါဟာ မျှော်လင့်ချက် မဟုတ်ဘူးတဲ့။ စောင့်ဆိုင်းမှုဆိုတာ ပါလာရင် ဒါဟာ ဆန္ဒပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါ မျှော်လင့်ချက် မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ မျှော်လင့်ချက်ရယ်လို့ ပြောတဲ့အတွက် သူဟာ တံခါးထဲကို ၀င်ဖို့ ကြိုးစားသင့်တယ်။ ဒီတံခါးကို သူကိုယ်တိုင် ၀င်ဖို့ မကြိုးစားပဲ တစုံတယောက်ရဲ့ အမိန့်အာဏာ၊ တစုံတယောက်ရဲ့ အားကိုးမှုနဲ့ သူဝင်ဖို့ သူဟာ စောင့်နေခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် သူဟာ ဒီတံခါးထဲကို ၀င်ခွင့် မရခဲ့ဘူး။
နောက်ဆုံးကြတော့ တံခါးကြီးက ပြန်ပိတ်သွားရပြီတဲ့။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတော်တော်များများဟာ ဒီလို စိတ်ထားမျိုး ရှိကြတယ်။ ကျနော်တို့တွေအားလုံးမှာ ဒီအဖိုးအိုလို စိတ်ထားမျိုး ရှိကြတယ်။ ဒါ မျှော်လင့်ချက်ပိုင်ရှင်တွေ မဟုတ်ဘူးလို့ အဲလစ်စတုန်းက ပြောပါတယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့က အဲ့ဒီ ပုံဝတ္ထုကို ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျမတို့ ညံ့နေတာတွေ တော်လာအောင် မျှော်လင့်ချက်ဆိုတာ စောင့်ဆိုင်းနေရုံနဲ့ မရဘူး၊ ကျမတို့ ကိုယ်တိုင် မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပါဖို့ လိုပြီးလို့ ကျမ အဲ့လို တွေးပါတယ်၊ အဲ့ဒါနဲ့ အဲလစ်စတုန်းပြောသလို မျှော်လင့်ချက် အရှင်ဖြစ်အောင် ကျမတို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာကြပါတယ်။ ဒီအစောင့်ကြီး ကျော်ပြီးတော့ အထဲကို ၀င်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ၊ ဒါပေမယ့် ကျမ ဘာနည်းလမ်းမှာ မတွေ့သေးပါဘူး။ ခုချိန်ထိ တံခါးကြီးက ပွင့်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမ နည်းလမ်းမတွေ့သေးတဲ့အတွက် မတော်သေးပဲ ညံ့ဖျင်းတဲ့ လူတယောက် ဖြစ်နေပါတယ်၊ ဒါဟာ ကျမတယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျမသူငယ်ချင်းတွေ အကုန်လုံး ဒီလိုပါပဲ။ ဆရာဝန်တွေ၊ တချို့ စာရေးဆရာတွေ ကျမလောက်နီးပါး ညံ့တဲ့လူတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့ အထဲကို ၀င်ဖို့ နည်းလမ်းတခုခုတော့ ရှိမယ်ဆိုပြီး ရှာကြပေမယ့် နည်းလမ်းမတွေ့ခဲ့တော့ ကိုယ်ကိုကိုယ် နည်းနည်းတော့ ဒေါသဖြစ်မိတယ်။ ဘေးက ကြည့်တဲ့ ပရိသတ်လဲ ဒီလောက်ညံ့ရသလားဆိုပြီး ဒေါသထွက်ချင် ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင်တော့ ကျမဟာ ဒီခရီးသည်ကြီးလို ဖြစ်နေဆဲပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျမ စာနယ်ဇင်း သတင်းစာဆရာကြီး တယောက်ကို လူတယောက်မေးတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖြေသိမ့်ပါတယ်။ သူက နိုင်ငံကျော် စာနယ်ဇင်း သတင်းစာဆရာကြီးတယောက်ကို ဘာမေးသလဲ ဘာပြောသလဲဆိုတော့ "ခင်ဗျားတို့ သတင်းစာဆရာတွေဟာ ပြဿနာတွေကို ရှာနေကြတာပဲ၊ ပြဿနာတွေကို ရှာပြီး ဒီပြဿနာရဲ့ အဖြေကိုတော့ ပြည်သူတွေကို ချပြဖို့ သတိမရကြဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ တော်တော်ညံ့တဲ့ လူတွေပဲ" လို့ သတင်းစာဆရာကြီးကို ဝေဖန်ပါတယ်။ ဒီတော့ သတင်းစာဆရာကြီးက ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ "ဟုတ်ကဲ့၊ ကျနော်ဟာ ပြဿနာရဲ့ အဖြေမသိလို့သာ သတင်းစာဆရာ လုပ်နေတာပါ၊ ပြဿနာရဲ့ အဖြေကိုသာ သိရင် နိုင်ငံရေးသမားပဲ လုပ်မှာပေါ့" တဲ့။ အဲ့ဒီလို သူက ဖြေတယ်၊ ဒီတော့ ကျမလဲ ဒီသတင်းစာဆရာကြီးလိုပဲ ဖြေရပါ လိမ့်မယ်။ ကျမဟာ စာရေးဆရာသာ ဖြစ်ပါတယ်၊ စာရေးဆရာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြဿနာတွေ ရှာတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်ရင် သက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျမဟာ ပြဿနာတွေရဲ့ အဖြေကို မသိလို့သာ စာရေးဆရာ ဖြစ်နေတာပါ။ ပြဿနာတွေရဲ့ အဖြေကို သိရင် နိုင်ငံရေးသမား လုပ်မှာပေါ့။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင် (လက်ခုပ်သံများ) အဲလို့သာဆိုရင် ကျမကို ခုလို ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ် စာပေဟောပြောပွဲ စင်မြင့်ပေါ်မှာ ကျမကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ။
(၁၉၉? လောက်က ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ ဟောပြောချက်ကို ဒေါင်းအိုးဝေ စာစောင်( ? ခုနှစ်) မှ ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)
# Posted by Tharnge (KTL-SF) on ဒီဖင်ဘာ 16, 2009 at 7:58am
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 11:07 PM0comments
၁) တစ်ပါးသူဟာ ဘယ်လောက်ပဲဆိုးနေပါစေ၊ ကိုယ့်ကိုယ် နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါစေ
သူ့ကို ခွင့်လွတ်တတ်ရမယ်။ လက်လွတ်တတ်ရမယ်။ ဒါမှ တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို
၂) ပျော်ရွှင်ချိန်မှာ ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ထားရသလို
စိတ်ပျက် အားငယ်ချိန်မှာလည်း ဒီအားငယ်မှုတွေဟာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးလို့
၄) စကားတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။
စကားအခွန်းတစ်ထောင်သုံးမှ လူတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ပါးစပ်ဖျားမှာ ကိုယ်ချင်းစာတရားကို ချိတ်ဆွဲထားပါ။
၅) ကိုယ့်ရဲ့ အသိဥာဏ်ပညာကြားမှာ စိတ်ကြီးဝင်တဲ့ ပေါင်းမြက်တွေ
စိုက်ပျိုးမထားပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ မဝင့်ဝါတဲ့စိတ်ကြောင့် အသိဥာဏ်တွေ
၆) သူ့ကို မနာလိုဖြစ်တိုင်း ကိုယ့်အတွက် ဘာကောင်းကျိုးမှ မဖြစ်စေဘူး။
သူ့ကို မနာလိုဖြစ်တိုင်း သူ့အောင်မြင်မှုတွေ လျှော့သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
၇) အခွင့်အရေးကို ဖန်တီးသူဟာ ထက်မြက်သူ
အခွင့်အရေးကို စောင့်မျှော်သူဟာ တုံးအသူ
၈) သူတစ်ပါးရဲ့ အထင်အမြင်ကို အရင်နားထောင်ပါ။
ကိုယ့်အယူအဆကို ထုတ်ပြောဖို့ မလောပါနဲ့။
၁ဝ) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားမှုရှိလာတဲ့အခါ လောကမှာ ဘယ်သူ့မှ
၁၁) သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်နာကျင်မှုမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အပြစ်၊
ကိုယ့်ဆိုးကျိုးကို ဖုံးကွယ်တတ်တဲ့လူလောက် ရှက်ဖို့ကောင်းတာ မရှိဘူး။
၁၂) လောကမှာ ဘယ်တော့မှ သွားပုပ်လေလွှင့် အပြောမခံရတဲ့လူ မရှိသလို အမြဲတမ်း
အချီးကျူးခံနေရသူလည်း မရှိဘူး။ ကိုယ်စကားများရင် အပြစ်ပြောမယ်၊
ကိုယ်စကားနည်းရင်လည်း အပြစ်ပြောမယ်၊ ကိုယ်စကားလုံးဝ မပြောဘဲ
ဆိတ်ဆိတ်နေရင်လည်း အပြစ်ပြောမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလောကမှာ
၁၃) ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ မဟုတ်မမှန် သွားပုပ်လေလွှင့် သတင်းတွေအတွက်
၁၄) လူတွေက ကိုယ့်ကိုကြောက်တယ် ဒါ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ဘူး။
လူတွေက ကိုယ့်ကိုနှိမ်တယ် ဒါ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။
၁၅) တစ်ခြားသူက ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်က
တစ်ခြားသူရဲ့ စကားကိုယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာ။
စာကြွင်း-Forward Mail တစ်ခုမှ ရရှိသည်ကို shareလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်...
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 10:39 PM0comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှစ်သက်ရင် ဘယ်အရာမှ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
သစ်ပင်တစ်ပင်ရှေ့ ကိုယ်အမြဲဖြတ်တယ်။ အဲဒီသစ်ပင်မှာ တစ်ခြားသစ်ပင်လိုပဲ
စိမ်းစိုတဲ့ သစ်ရွက်တွေရှိတယ်။ ပန်းပွင့်တွေရှိတယ်။ အဲဒီသစ်ပင်က ကိုယ့်အတွက်
ဘာမှမထူးခြားလို့ သတိမထားခဲ့မိဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာ အဲဒီသစ်ပင်ရှေ့
ကိုယ်ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်မိတယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲ အပင်ပေါ်က အရွက်တစ်ရွက်ကို ဆိတ်ပြီး
ချေမွကြည့်တယ်။ တခဏအတွင်း သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့တစ်ခု လေထဲ လွင့်ဝဲလာခဲ့တယ်။
မွှေးကြိုင်တဲ့ရနံ့ကို ကိုယ်ရှုရှိုက်မိပြီး ဒီသစ်ပင်ဟာ သံပရာ(ရှောက်)ပင် ဆိုတာ
ကိုယ်သိလိုက်တယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်လေထုမှာ သံပရာရနံ့က
သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်နေခဲ့တယ်။ နောင်နောက် သစ်ပင်ရှေ့ ကိုယ်ဖြတ်တိုင်း
အဲဒီသစ်ပင်က အရင်ကလို ကိုယ့်အတွက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ မနေခဲ့တော့ဘူး။
သံပရာပင်ကို ချည်းကပ်သလိုမျိုး အရင်က ကိုယ်တကယ် မသိ၊ နားမလည်ခဲ့တဲ့
သူငယ်ချင်းတွေကို ချည်းကပ်ပါ။ သူတို့ဆီကနေ မွှေးကြိုင်တဲ့ရနံ့တွေ
ထွက်လာနိုင်ပြီး ကိုယ်တို့ကြားမှာ လွင့်ဝဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မနက်အိပ်ရာထတိုင်း ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်က ကိုယ့်အတွက် မရှိမဖြစ်ပါ။ ကော်ဖီတွေ
လည်ချောင်းတစ်လျှောက် စီးဆင်းသွားမှ ကိုယ့်ဦးနှောက်တွေ ကြည်လင်လာတယ်။
ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးမှ ကိုယ့်အတွေးတွေ
ကြည်လင်လာနိုင်တယ်။ အမှားအမှန် ခွဲခြားလာနိုင်တယ်။ စိတ်ထိခိုက်
နာကျင်ခံစားဖူးမှ ကြံ့ခိုင်မှုကို သင်ယူနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်
ထိခိုက်နာကျင်ခဲ့သမျှကို အထက်တန်း ကော်ဖီမှုန့်လို့ သတ်မှတ်ပြီး
စဉ်းစားဆင်ခြေဥာဏ်ဆိုတဲ့ ရေပူပူထဲ ထည့်ဖျော်လိုက်ပါ။ အဲဒီကော်ဖီခါးနဲ့
ကိုယ့်ဦးနှောက်၊ ကိုယ့်အတွေးအိမ်ကို ကြည်လင်ပါစေ။
ရေမွှေးရဲ့ ထူးခြားချက်က ဖော်စပ်သူရဲ့ လက်ထဲမှာရှိသလို ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်က
ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောထားတွေကို လူတွေအပေါ်
လတ်ဆတ်ကြည်လင်၊ စွဲမက်အောင် ကောင်းကောင်းဖော်စပ် (ပြုပြင်)သင့်တယ်။
သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာတဲ့ဒီမိုးကြောင့် အချိန်အတော် လင့်ခဲ့ရတယ်။
အဝတ်အစားတွေလည်း မခြောက်သေးဘူး။ စိတ်လည်း စိုထိုင်းလို့....
လာ.... စိတ်လန်းဆန်းတဲ့ နည်းတစ်ခု ပြောပြမယ်....
ရေနွေးတစ်ဇလုံထည့်ပြီး ခေါင်းလျှော်ပါ။ ခေါင်းထဲက စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကို
အဖြူရောင် အမြုပ်ဖြစ်အောင် လျှော်ဖွပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ရေနွေးနဲ့
ဆေးချလိုက်ပါ။ စိတ်ကို ကပ်ကပ်စီးစီးဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေ ရေတွေကတစ်ဆင့်၊ ရေမြောင်း၊
ရေချောင်းထဲ စီးဆင်းသွားပါစေ... အဲဒီနောက် ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ ထိုင်ပြီး
သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခေါင်းကို ဖြီးလိုက်ပါ။
ခေါင်းသားကနေတစ်ဆင့် ဦးနှောက်ထဲက အတွေးတွေပါ သန့်ရှင်းကြည်လင်သွားပြီ
အဲဒီရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်က မသောက်ဘဲ ကြာကြာထားလို့ အေးသွားခဲ့ပြီ။ အေးစက်တဲ့
ရေနွေးကြမ်းမှာ မွှေးကြိုင်တဲ့ လက်ဖက်ခြောက်နံ့ မရှိတော့ဘူး။ ရေနွေးအိုး
သံချေးနံ့ပဲ ရတော့တယ်။ အဲဒီလို အေးစက်တဲ့ ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကို
အဲဒီလိုပဲ အသည်းနှလုံးတစ်ခု ကြာကြာလျှစ်လျှူရှူခံရရင် တဖြေးဖြေး
အေးစက်သွားတတ်တယ်။ အေးစက်တဲ့ နှလုံးသားတစ်ခု ပြန်နွေးထွေးဖို့က ခက်တယ်။
ပြန်နွေးထွေးခဲ့သည်ထားဦး အရင်ကလိုကြင်နာတဲ့ နှလုံးသားတစ်ခု မဟုတ်တော့ဘူး။
အေးစက်သွားတဲ့ အခြေအနေ၊ ဆက်ဆံမှုတစ်ခု နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့
ပြန်ဖြစ်ချင်ရင် အသစ်ကနေပဲ ပြန်စလို့ ရနိုင်တော့မယ်။ စိတ်သဘောထားအသစ်၊
အကျင့်စရိုက်အသစ်နဲ့ နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံမှုအသစ်တစ်ခုကို စတင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်
သူ့နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်နိုင်၊ မလှုပ်နိုင် မသေချာလှဘူး။
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်တဲ့အချိန်..
အဲဒီနာကျင်ခြင်းတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကို ထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်သူက
ကိုယ့်ကို မလိုမုန်းထားလို့ဖြစ်တယ်။ အဲဒီထိခိုက်တာကို စိတ်ထဲထားပြီး
တမြေ့မြေ့ခံစားနေတာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိပ်စက်နေတာဖြစ်တယ်။ သူက
ကိုယ့်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင် လုပ်ခဲ့ပြီပဲ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီနာကျင်တာကို
စိတ်ထဲထားပြီး သူကိုယ့်အပေါ် ပြုမှုခဲ့တာကို တသသနဲ့ ခံစားနေဦးမလဲ!
ဒါကြောင့် မှတ်ဥာဏ်မကောင်းသူက တစ်ခြားလူထက် ပိုပျော်ရွှင်ကြသလို
ရွံ့မုန်းစရာကောင်းတယ်လို့ ထင်လား? မှန်တစ်ချပ်ကို ယူပြီး သေချာကြည့်ပါ။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့အလှဆုံးအပြုံးကို ပြုံးပြီး မှန်ထဲကအရိပ်ကို "နင်အရမ်းလှတယ်၊
နင်ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့... အရာအားလုံးကို ဒီနေ့မှာ အဆင်ပြေပြေ
ကျော်ဖြတ်မယ်" လို့ ပြောပါ။
# Posted by grace on December 21, 2009 at 5:01am
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 9:26 PM0comments
# Posted by soe moe thu on December 19, 2009 at 6:06pm
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 9:25 PM0comments
သားသမီး ဆိုသည်မှာ မိဘများ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်း များကို လက်ဆင့်ကမ်း ပိုင်ဆိုင်ကြရမယ် ဆိုပြီးတော့ သာမန်အားဖြင့် တွေးလို့ ရနိုင်တာပဲ။ မိဘတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်း များကို လက်ဆင့်ကမ်း ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ နေရာမှာ နှစ်မျိုး နှစ်စား ရှိတယ် ဆိုတာကို သားတို့၊ သမီးတို့ မှတ်သားထားကြရဖို့ ဘုန်းဘုန်း ပြောပြမယ်။
ပထမ တစ်မျိုးက သားသမီး ၀တ္တရား ငါးပါး မကျေပွန်ဘဲနဲ့ မိဘတွေ ဆီက ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို လက်ခံ ရရှိလိုက်တာ။ ဒုတိယ တစ်မျိုးက သားသမီး ၀တ္တရား ငါးပါး ကျေပွန်ပြီးမှ မိဘတွေ ဆီက ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ရရှိလိုက်တာ။
အဲဒီတော့ ပထမ သားသမီးမျိုးက မိဘတွေဆီကနေ မတရားတဲ့ နည်းနဲ့ ရရှိလိုက်တာ။ ဒုတိယ သားသမီးမျိုး ကျတော့ မိဘတွေ ဆီက တရားတဲ့နည်းနဲ့ လက်ခံ ရရှိတာ။
မတရားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ရရှိလိုက်တယ် ဆိုတာက မိဘတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ မိဘတွေရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ မိဘတွေရဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိဘဲနဲ့ မိဘတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ အရာတွေကို လိုချင် လောဘ တက်နေကြတာလေ။
တရားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ လက်ခံ ရရှိတယ် ဆိုတာကတော့ မိဘတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွား၊ မိဘတွေရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ မိဘတွေရဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးမှ မိဘတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ အရာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်း ရရှိလိုက်တာကို ဆိုလိုတာပါပဲ။
မတရားတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ရရှိလိုက်တဲ့ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာ မသန့်စင်ဘူး။ မဖြူစင်ဘူး။ မမွန်မြတ်ဘူး။ တရားတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ရရှိလိုက်တဲ့ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်း တွေကသာ သန့်စင်တယ်။ ဖြူစင်တယ်။ မွန်မြတ်တယ်။
ဒါကြောင့် မိဘတွေ ပိုင်ဆိုတဲ့ အရာတွေကို ရရှိတာခြင်း တူတယ် ဆိုတာတောင်မှ သန့်စင်မှု။ မသန့်စင်မှု၊ ဖြူစင်မှု၊ မဖြူစင်မှု၊ မြင့်မြတ်မှု၊ မမြင့်မြတ်မှု ဆိုတာတွေက ကွာဟနေသေးတယ် လို့ သားတို့၊ သမီးတို့ နားလည်ထားရမယ်။
ကဲ ဒါဆိုရင် သားတို့၊ သမီးတို့တွေဟာ မိဘတွေရဲ့ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို ရရှိလာတဲ့အခါမှာ သန့်စင်၊ ဖြူစင်၊ မွန်မြတ်နေအောင် မြတ်စွာဘုရားက နည်းလမ်းလေး ပေးထားတာ ရှိတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက သိင်္ဂါလောဝါဒ သုတ္တန်မှာ သိင်္ဂါလောဝါဒ သတို့သားကို ဟောကြား ဆုံးမထားတဲ့ သားသမီး ၀တ္တရား ငါးပါး ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ သားတို့၊ သမီးတို့ ကြားဖူးပြီးသားပါ။
ကျွေးမွေးမပျက် ဆိုတာက မိဘတွေ အိုမင်းရင့်ရော်လာတဲ့ အခါမှာ မိဘတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစားအသောက်များကို လိုလေသေးမရှိ ကျွေးမွေးတယ်။ မိဘတွေကို ငြူစူမှု မရှိဘဲ စိတ်ရှည် သည်းခံစွာနဲ့ ပြုစုတယ်။
ဆောင်ရွက်စီမံ ကတော့ မိဘတွေရဲ့ လောကီအကျိုး၊ လောကုတ္တရာအကျိုး နှစ်ရပ်လုံးကို လစ်ဟာမှု မရှိလေအောင် စီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်။
အဲဒီမှာ လောကီအကျိုး ဆိုတာက မိဘတွေရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာစေဖို့ မိမိမှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေကို အလကား မသုံးပစ်ဘဲ မိဘတွေနဲ့အတူ လိုအပ်တဲ့ အလုပ် နေရာတွေမှာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပေးတာ ဖြစ်တယ်။ မိဘတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူ ဖြစ်စေတယ်။ မိဘတွေရဲ့ အချိန်နဲ့ လုပ်အား၊ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်မှုတွေကို သက်သာစေတယ်။
လောကုတ္တရာအကျိုး ဆိုတာကတော့ မိဘတွေ ကုသိုလ် ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်ကြတဲ့ အခါကျရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်စေဖို့ သားတို့၊ သမီးတို့က စိတ်အား ထက်သန်စွာနဲ့ ၀င်ပြီး ကူညီပေးကြတာဖြစ်တယ်။
ဥပမာ - မိဘတွေက ဘုရားကျောင်းကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများကို သွားပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ ဥပုသ် သီတင်းသီလများ ဆောက်တည်ချင်တယ်၊ တရားအားထုတ်ဖို့ တရားစခန်းများကို ၀င်ချင်တယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီ အခါမှာ သားတို့၊ သမီးတို့က မိဘတွေကို လိုက်ပို့ပေးတာတို့ အနောက်ကနေပြီးတော့ လိုအပ်တာတွေကို စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးတာတို့၊ အဲဒါတွေကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ ငြိုငြင်ခြင်း မရှိဘဲ လုပ်ဆာင်ပေးရမယ်။ ဒါမှသာ မိဘတွေက တရားအားထုတ်တဲ့ အခါကျရင် စိတ်ချလက်ချနဲ့ တရားဓမ္မတွေကို လေးလေးနက်နက် အားထုတ်နိုင်ကြမှာလေ။
မွေခံထိုက်စေ ဆိုတာကတော့ မိဘတွေ ပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ ငွေကြေး၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို စည်းကမ်းတကျနဲ့ တိုးတက်အောင် လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး လက်ရှိအနေအထားထက် ပိုပြီး တိုးတက်ကြီးပွားလာအောင် ကြိုးစားကြဖို့ အမွေဆက်ယူတာ ဖြစ်တယ်။
လှူမျှဝေ၍ ဆိုတာက ဆုံးပါး သွားကြပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘိုးဘွားတွေ သော်လည်းကောင်၊ မိဘတွေ သော်လည်းကောင်း ရှိခဲ့ကြသည် ရှိသော် သေဆုံးသွားကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ရရှိနိုင်ကြစေဖို့ ရည်စူးလျှက် သားတို့၊ သမီးတို့က ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီး ရရှိလာတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို အမျှပေးဝေခြင်း ဖြစ်တယ်။
စောင့်လေမျိုးနွယ် ဆိုတာက သားတို့၊ သမီးတို့ရဲ့ မိဘဘိုးဘွား၊ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ၊ ဆွေမျိုးသားချင်း အဲဒါတွေ အားလုံးကို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ရမယ်။ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေရမယ်။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြရမယ်။ တစ်ဦးရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေကို တစ်ဦးက ဖေးမ ဆောင်မ ပေးရမယ်။
အဲဒီလိုမျိုး ကျင့်ဝတ်ငါးသွယ်ကို သားတို့၊ သမီးတို့က တစ်သွေမတိမ်း လိုက်နာကြပြီး မိဘတွေ အပေါ်ကို ကျေးဇူး အထူး သိတတ်သွားကြမယ် ဆိုရင် သားတို့၊ သမီးတို့တွေဟာ အမွေခံထိုက်သူတွေ ဖြစ်သွားကြမှာပဲ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ သားတို့၊ သမီးတို့ဟာ မိဘကို သေမှ ငိုကြမယ့် သားတွေ၊ သမီးတွေ ဖြစ်သွားကြလိမ့်မယ်။ မိဘတွေ မသေခင်မှာလည်းပဲ မလုပ်ကျွေးဘူး သေတဲ့ အခါကျရင်တော့ အသံကုန်ဟစ်ပြီး အော်ငိုပြကြမယ် ဆိုရင် သဘာဝ သိပ်မကျ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် စကားလေးတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာတာပေါ့။
“မိဘကို သေမှ မငိုနဲ့။ မသေခင် လုပ်ကျွေးကြ”
မိဘတွေ သေဆုံးသွားတဲ့ အခါကျရင် မငိုရလေအောင် သားသမီး ၀တ္တရား ငါးပါးကို ကျေပွန်ထားကြပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ ငိုစရာတောင် မလိုတော့ပါဘူး။ သားတို့၊ သမီးတို့က တာဝန်တွေ အားလုံးကို ကျွေပွန်ပြီးကြပြီ မဟုတ်လား။
ဒါဆိုရင်တော့ သားတို့၊ သမီးတို့ဟာ ဖြူစင်စွာနဲ့ အမွေခံထိုက်သူတွေ စင်စစ်မသွေ ဖြစ်သွားကြပါပြီ။ ဖြူစင်စွာနဲ့ အမွေခံထိုက်သူတွေ ဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ ဘုန်းဘုန်း မှာလိုက်ချင်ပါတယ်…..
အရှင်ဉာဏဒီပ (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီတက္ကသိုလ်) http://www.ashinnyanadipa.com, nyanadipa@gmail.com
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 9:22 PM0comments
ခုခေတ်ကာလ အချို့သော ဘုရားလူကြီးတွေက ဤစေတီတော်က တန်ခိုးကြီးသည်၊ နတ်ကြီးသည် ဒါ့ကြောင့် ဤဘုရားစေတီအနီးသို့ အမျိုးသမီးများ ချဉ်းကပ်ထိကိုင်လျက် ရှိခိုးဦးတိုက်ခြင်းမပြု၊ ပြုလပ်လျှင် လေကြီး မိုးကြီး ကျလိမ့်မည်၊ ကျားတို့ ဆင်တို့ ထလိမ့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် တားမြစ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ-- ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်လိုမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့သော ဂေါပကလူကြီးတွေကလည်း ဤဘုရားသခင် သီတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူရာ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတော်သို့ အမျိုးသမီးများ မတက်ရ၊ မ၀င်ရ၊ ဆွမ်းတော်ပန်းတော် ကပ်ခြင်း, တံမြက်စည်းလှည်းခြင်း, ပွတ်တိုက်သန့်ရှင်းခြင်း ရှိခိုးဦးတိုက်ခြင်း မပြုလုပ်ရ၊ ပြုလုပ်လျှင် ပင်လယ်လှိုင်းဝဲဂယက်ကြီးက ဆူပွတ်မျိုးဝါး၍ သွားလိမ့်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် တားမြစ်ကြသောကြောင့် အဝေးကြီးကနေပြီး ဖူမြော် ရှိခိုးကြရပါသည်။ ဥပမာ... ကျိုက္ခမီမြတ်ဘုရားလိုမျိုး ပါ။
တကယ်တော့ ဘုရားဟောပိဋကတ်တော်မှာ အဲဒီလိုဟာမျိုး တားမြစ်ချက်တွေ မပါရှိပါဘူး။ ဤတားမြစ်ချက်တွေဟာ အမျိုးသမီးများအတွက် သက်သက် စိတ်နှလုံး မကြည်စရာမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် မဟာကရုဏာရှင်ကြီး ဖြစ်တော်မူပါတယ်၊ သတ္တ၀ါအများကို သနားကြင်နာတဲ့ နေရာမှာ အမျိုးသားရယ်၊ အမျိုးသမီးရယ်လို့ ခွဲခြား နိမ့်မြင့်မှု မပြု၊ မထားပါဘူး၊ တစ်သားတည်းပဲ ထားတော်မူပါတယ်။
သာသနာတော်အတွင်းမှာ အမျိုးသားတွေ ရှင်သာမဏေဘ၀၊ ရှင်ရဟန်းအဖြစ် ရယူကာ နိဗ္ဗာန်, မဂ်, ဖိုလ် တရားမြတ် ခံစားနိုင်သလို အမျိုးသမီးများကိုလည်း သာမဏေမအဖြစ်, ရဟန်းမအဖြစ် ရယူကြလျက် နိဗ္ဗာန်, မဂ်, ဖို တက်ရောက်နိုင်ခွင့် ပေးခဲ့တာတွေကို ဉာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီတော်အနီး အမျိုးသမီးများ မတတ်ရတဲ့ ကိစ္စနဲ့စပ်၍ ဆရာတော်ဦးသြဘာသရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကို တင်ပြပေးပါမယ်။ ဆရာတော်သည် ရဟန်း တစ်ဝါရ ၁၂၈၈-ခု၊ ပြာသိုလ်လပြည့်နေ့၌ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်တော်ကို အုပ်ချုပ်နေသော ဆရာတော်ဦးအာဒိစ္စနဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးများ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီအနီးမတက် ရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆရာတော်ဦးအာဒိစ္စ ပြန်လည်မိန့်ကြားတာက..
ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်အနီး ကပ်ပြီး အမျိုးသမီးများ ကျောက်လုံးတော်ကြီးအား တွန်းလှုပ်ခြင်း, နဖူးဖြင့် တိုက်ပွတ်၍ ရှိခိုးခြင်းစသည်တို့ ပြုလုပ်ပူဇော်တာရယ်လို့တော့  မရှိဖူးသလောက်ပါတဲ့။ ဒါ့ကြောင့် မိုးမှုန်တိုင်းကြီး ကျရောက်ခြင်း၊ ကျား, ဆင်တို့ ထကြွခြင်း ဆိုတာတွေလည်း တစ်ခါမှ မဖြစ်ဘူးသေးဘူးတဲ့။
အမျိုးသမီးတွေ သံတံခါးကနေပြီး စေတီဘက်ကို ကူးမတက်ရတာကတော့ စေတီရင်ပြင်က ကျဉ်းတယ်၊ အကာအရံလည်း မရှိတဲ့အတွက် အားငယ်၍ ကြောက်တတ်သော သတ္တိနည်းတဲ့ အမျိုးသမီးများနဲ့ မသင့်လျော်လို့ မူးမော်ခြင်း, လိမ့်ကျခြင်း, အန္တရာယ်များကြောင့် တားမြစ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အမျိုးသမီးတွေ စေတော်၏ ခြေတော်ရင်းအထိ လာရောက်ရှိခိုးပူဇော်တာကို နတ်များက မကြိုက်လို့ တားမြစ်ခြင်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဖြေကြားသွားဘူးပါတယ်။
ဤဆရာတော်ရဲ့ မိန့်ကြားချက်ကို ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုရင်.. အားငယ်ခြင်းမရှိတဲ့... လိမ့်ကျမှာကို မကြောက်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးများ ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားစေတီအနီး ချဉ်းကပ်ကာ ဖူးမြော်နိုင်တယ်ဆိုတယ်လို့  ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
ကျိုက္ခမီစက်ဆဲမှာရှိတဲ့ ကျိုက္ခမီရေလယ်ဘုရားဆင်တုတော်ရှိ ရာ ဂန္ဓကုဋီကျောင်းတန်ဆောင်းထဲ သို့ အမျိုးသမီး မတတ်ရ၊ မ၀င်ရ၊ ၀င်ရောက်ဖူးမြော်ရင် လေကြီးမိုးကြီးကျမယ် စသည်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆို တားမြစ်ကြတာကို ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာခေတ်က သာသနာအတွက် ချီးမြောက်ခဲ့တဲ့ သူဌေးကြီး ဆာဦးသွင်နဲ့ ဆရာတော်ဦးသြဘာသ ဆွေးနွေးခန်းကိုပဲ တင်ပြပေးပါမယ်။ သာသနာ့ ကျေးဇူးရှင် သူဌေးကြီးအလိုအရ သူကတော့ သများရဲ့ ကုသိုလ်ရရေး ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို မတားမြစ်ဝံ့ပါဘူး၊ သမိုင်းဆရာတွေက ရေးသားတားမြစ်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာရှိနေလို့ အမျိုးသမီး မတတ်ဝံ့တာပါ၊ အမျိုးသမီးတွေ တက်ရောက်ဖူးမြော်ရင် ၀ဲဂယက်ကြီးတွေ ဆူပွက်မျိုဝါးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်း သူက မယုံကြည်ပါဘူးတဲ့။ (ပုညံဝ သုခံ ဇနေတိ= ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်သူဟာ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပဲ ရလိမ့်မယ်လို့သာ သူယုံကြည်ပါတယ်တဲ့။ အမျိုးသမီးတွေ ဘုရားတန်ဆောင်းထဲ မတတ်ဝံ့ မ၀င်ဝံ့ဘူးဆိုလို့ သူတို့ဖူးမြော် ရှိခိုး နိုင်ရန် အာရုံခံတိုက် ကလေးတစ်လုံးကိုတောင် ဒကာကြီးက သပ်သပ်သီးခြား ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းထားပေးရပါသေးတ ယ်တဲ့။ ဒါကတော့ သူဌေးကြီး ဆာဦးသွင်ရဲ့ ခံယူချက်နဲ့ အမြင်ပါ။ သူ့ရဲ့ ဆိုလိုရင်းက အမျိုးသမီးတွေ မတတ်ဝံ့ မ၀င်ဝံ့လို့သာပါ။ တက်ဝံ ၀င်ဝံရင် ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးတရားတွေ ပိုမိုတိုးပွားပြီး လာကြမှာပဲလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
အခုခေတ်အမြင့်အရက ပင်ကိုယ်က အားနည်းတဲ့ အမျိုးသမီးများကို သမိုင်းဆရာတွေက ထပ်ဆင့် ခြောက်လှန်ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို အမျိုးသားများနည်းတူ အဦးဆုံး တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးခဲ့သော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမတိုင်ခင်ကဆို အမျိုးသမီးများရဲ့ အခွင့်အရေးသည် မီးဖိုခန်းမှာပဲ လမ်းဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ပွင့်ထွန်းလာပြီးနောက်... အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားများပမာ ရဟန်းပြုခွင့်ကိုလည်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ ခက်ခဲစွာ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး ရတာကိုမှ တန်ဖိုးထားတတ်တာကို သိစေလိုသဖြင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ မိထွေးတော်က ဘိက္ခုနီမသာသနာ ခွင့်ပြုဖို့ တောင်စဉ်က လွယ်လွယ်နဲ့ ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ မိထွေးတော်က ဂရုဓမ္မ (၈)ပါးကို လက်ခံသောအခါမှ ဘိက္ခုနီသာသနာ (အမျိုးသမီးများ ရဟန်းပြုဖို့) ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားကျောင်းတက်တာ၊ ဘုရားဆည်းကပ်တာစတာတွေသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားရှင်အနီး အမျိုးသမီး မချဉ်းကပ်ရစသည် တားမြစ်ချက်တွေ ဘုရားဟောထဲမှာ မပါရှိပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာ ရင်းနှီးစွာ မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းမှာဝပ်စင်းရှိခိုးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင် ဘုရားဖြစ်ပြီးနောက် နေပြည်တော် ကပိလ၀တ်သို့ ပြန်ကြွတဲ့အခါမှာလည်း ယသောဓရာမိဖုရားက မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ခြေတော်အစုံကို လက်အုပ်မိုးကာ ရှိခိုးဘူးပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ မြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ မိထွေးတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမိထွေးတော်ဂေါတမီရဟန္တာမကြီး က သူပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံရတော့မည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်ထံ သွားပြီးတော့ ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာ ပါဠိတော်ဂါထာတွေ များစွာနဲ့ ပိဋကတ်တော်မှာ လာရှိပါတယ်။ တောင်းဆိုတဲ့ လိုရင်းကို ပြောရရင်....
ပုတ္တ-- ဒုက္ခဆင်းရဲ့အပေါင်းကို ကုန်ဆုံးအောင် ဟောကြားသင်ပြ၍ ပေးသနားတော်မူသော သားတော်မြတ်စွာဘုရား၊ သားတော်မြတ်၏ “စက္က သမ္ပုဏ္ဏကောမလပါဒ”=ဂုဏ်ကို ဆောင်တော်မူသော တစ်ရာ့ရှစ်ကွက် စက်လက္ခဏာတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ ကြာပန်းကဲ့သို့ နူးညံ့ပျောင့်ပျောင်းကုန်ေ သာ ခြေတော်အစုံတို့ကို ဆန့်တန်းတော်မူပါ ဘုရား။ အရှင်မြတ်ဘုရား၏ ခြေတော်အစုံတိုပကို မယ်တော်၏ ဦးခေါင်းနဖူးတို့ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ပွတ်တိုက်ကာ ရှိခိုးဦးတင် ဖူးမြော်ကန်တော့မှုကို ပြုပါမည်ဘုရားဟု လျှောက်ထားတောင်းပန်တဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားက ခြေတော်အစုံကို ဆန့်တန်းပေးတော်မူပါတယ်။
ထိုအခါ မိထွေးတော်ဂေါတမီ ရဟန္တာထေရီမကြီးက ဦးခေါင်းနဖူးတို့ဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ပွတ်တိုက်ကာ နောက်ဆုံး ရှိခိုးကန်တော့ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ပူဇော်သွားတဲ့ ထုံးတမ်း စဉ်လာတွေ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလ ကတည်းက ရှိပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လ ည်း ယနေ့အချိန်အထိ အမျိုးသမီးများဟာ အမျိုးသားများနည်းတူ ဘုရားရင်ပြင်တော်၊ ဘုရားရှင်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်ကာ ရှိခိုးခွင့်၊ ဖူးမြော်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် တချို့နေရာဒေသတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ဒီလိုခြိမ်းခြောက် တားမြစ်ကြတာဟာ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နဲ့ မညီဘူး၊ မပြုလုပ်ကောင်းဘူးလို့ စာတတ်ပေတတ်ဆရာတော်ကြီးများ က မိန့်ကြားကြတာပါ။
တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ... အမျိုးသမီးများဟာ မိမိတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားကို ရေသပ္ပာယ်တဲ့အခါ မထိမကို မပွတ်သပ်ဘူးလား...လို့ တားမြစ်ချက်ထုတ်ထားတဲ့ သူတွေ စဉ်းစားကြည့်ရင် ရှင်းပြီးသားပါ။
အားလုံးကို ခြုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင် တန်ခိုးကြီးဘုရားများမှာ အမျိုးသမီးများ ဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ် မတက်ရ၊ ရွှေသင်္ကန်းတက်မချရ စတာတွေသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ (ဒါမှမဟုတ်) ဂေါပကလူကြီးတွေ နတ်က နတ်ကြီးတယ်စသည်ဖြင့် ခြောက်လန့်ပြီး စည်းကမ်းထုတ်ထားတဲ့ တားမြစ်ချက်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတော့ အမျိုးသမီးများအတွက် ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို အမျိုးသားများနည်းတူ ပေးခဲ့တဲ့ မဟာကရုဏာရှင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
# Posted by လမ်းသရဲမလေးlimk on December 19, 2009 at 5:38am
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:29 PM0comments
Christmas နီးလာပြန်ပြီနော်။ christmas ပြီးပြန်တော. new year လေ ။ တစ်နှစ် ကုန်ပြန်ပြီပေါ့။ နောက်နှစ်ေ၇ာက်ပြီ ဆို၇င် ပဲ လွတ်လပ်ေ၇းနေ. ကို ကြုံ၇ပြီပေါ့နော်။ တို.လေ ငယ်ငယ်တုန်းက ကဗျာ၇ွတ်ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ပြိုင်ခဲ.တဲ. ကဗျာလေးကို သတိ၇လို.ပါ။ ကြာတော့ ကြာခဲ.ပါပြီ။ ၁၉၉၀ ခုလောက်ကပေါ့။ သူငယ်ချင်းတို. ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်။
ပထမ ကဗျာလေးကတော့ လွတ်လပ်ေ၇း အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ကဗျာလေးပါ။
ဟိုေ၇ှးယခင် အ၇ှင်များနဲ. ၊
မေ့မ၇သနော် မေ့မ၇သနော်။ ။ ။
ဒီကဗျာလေးကတော့ လွတ်လပ်ေ၇း၇ပြီး တိုင်း၇င်းသားတွေပျော်နေကြတဲ့ ကဗျာလေးပါနော်
၇ပ်တိုင်း၇ွာတိုင်း နွှဲပျော်၇ွှင် ၊
ဇန်န၀ါ၇ီ ၄ ၇က်နေ.၊
ဒီကဗျာလေး ၂ပုဒ်နဲ. လွတ်လပ်ေ၇းကို ၇ယူပေးခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းနှင့်တကွ ၊ ကျ ဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်း ခေါင်းဆောင် ကြီးများအား အလေးပြုပါ၏။။။။။။။။။။။။။
# Posted by jewel on December 18, 2009 at 8:47pm
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:08 AM0comments
Biography of Student Leader Ko Ko Gyi Written by Himself
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 7:06 AM0comments
Theravada (White Paper & Black Text)
Posted by ရောင်စဉ်ငြိမ်း at 6:41 AM0comments